Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/9 Jolay 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/9 Jolay 2013
Canada (nitranga in-1) : Natsidik'ireo mpianatra ihany koa fa tokony hampitoviana avokoa ny mpianatra mandranto fianarana rehetra, toy ny any Canada, Etazonia ary Frantsa, … Mahatratra 274 ireo mpianatra malagasy any Sina ary ny 10 tamin'ireo no tonga tany alohan'ny taona 2011- 2012, raha taty aoriana avokoa ny 264. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
hampiavaka (nitranga in-1) : Raha mahazatra hatramin'izay ny fahitana fampisehoana amin'ny sehatra marindrano, dia hampiavaka ity soaradihy ity ny fitondrana ny seho amin'ny sehatra manao ambaratonga. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
Sadly (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Randrianantoandro (nitranga in-1) : Haja Randrianantoandro. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
gana (nitranga in-1) : Araka ny fanazavan'i Velompa-nahy Aristide, filoha lefitry ny komity mpanara-maso ny fampiharana ny sori-dàlana (Csc) izay tompon' antoka tamin'ny famoriana ireto vondrona politika ireto dia «tokony ho tafatsan- gana ao anatin'ny telo na efatra herinandro eo ho eo ity fitsarana misahana ny fifidianana vaovao ity». (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Gougou (nitranga in-1) : Toy izany ihany koa i Gougou, izay nosoloina an-dRahery, samy mpilalao avy eo anivon'ny Cosfa avokoa. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
flyer (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
@RawyaRageh: ‘A bullet may kill a person, a lying camera kills a nation' on flyer dropped near AlJazeera's offices #Egypt “Mety mahafaty olona iray ny bala, mamono firenena ny fakantsary mandainga” hita ao amin'ny trakitra nalatsaka teo akaikin'ny biraon'ny AlJazeera Mpanoratra Amira Al Hussaini · Nandika Jentilisa
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao: facebook · twitter · reddit · StumbleUpon · delicious · Instapaper. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nanekeko (nitranga in-1) : Nanjary manana olana amin'ny fianakaviana mihitsy aho noho izay tsy nanekeko ny hanao famadihana izay intsony”, hoy ny raim-pianakaviana iray. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
tarihy (nitranga in-2) : Tsy vitsy ireo mpizaika avy amin'ny antoko poli-tika Kintana tarihin'i Tabera Randriamanantsoa nandray anjara tamin'ity seminera izay hifarana anio ity. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Ambohitsoa (nitranga in-1) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
Tahrir (nitranga in-4) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Formation (nitranga in-6) : isan'ireo ekipa nandefa fitarainana ny Tana Formation
Aorian'ny valin'ny fitarainana nataon'ireo klioba, momba ny taonan'ireo mpilalao sy ny andro farany amin'ny sabotsy izao, no hamantarana ireo ekipa efatra hiatrika ny «Poule des AS», eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona. (Any andafin’ny riaka)
Ofisy (nitranga in-1) : Nampahatsiahy ihany koa ny Ofisin'ny Bakalorea Antananarivo ny amin'ny tokony hahatongavan'ny mpiadina 30 minitra mialoha ny hanombohan' ny fanadinana. (Tapatapany)
mpizaika (nitranga in-2) : Tsy mety hilamina ny firenena raha izay foana no hatao ary hiverina hatrany ny krizy », hoy ny fanazavan-dRanaivoharison Tahina, isan'ireo mpizaika amin'ity seminera ity. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
Jazeera (nitranga in-13) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
Nifantohan'ny maso ny Al Jazeera tao Ejipta amin'izay lazain'ny maro fa fitantarana “mitongilana” nataony nandritra sy taorian'ny fanonganana ny filoha ejipsiana teo aloha Mohamed Morsi tamin'ny 4 jolay. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nami­ly (nitranga in-1) : Izy no nami­ly tamin' io fotoana io. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
mila­tsaka (nitranga in-1) : Mahagaga fa izay fahalalahan'ny kandidà afaka mila­tsaka na tsia no mahadodona ny eto an-toerana sy any ivelany, fa io tsy fanajàna ny làlam-pifidianana io tsy mba misy sahy manabaribary sy manameloka ren-tany aman-danitra mihitsy. (Fitsidiham-pahitra !)
alasafay (nitranga in-1) : Mitsidika fehy mitsidika, sady alasafay fotsiny. (Fitsidiham-pahitra !)
SEGAONDRA (nitranga in-1) : ROA SEGAONDRA
Nambaran'ny filohan' ny federasiona malagasin' ny rugby, Marcel Rakoto- malala, tao amin'ny fandaharana ara-pana- tanjahantena «Fou Sport» tamin'ny «Antoandro Express» tao amin'ny Radio Tana omaly fa «roa segaondra ny fanamarinana ny tapakila iray». (Anjoron- »CAN »)
hanaovana (nitranga in-2) : Ny vahoaka sahirana sy ny vontom-pinoana angamba izany no mora rebirebena sy mora hanaovana fandemen-tsafidy!
Fa inona moa izay ianao handalovany indray na indroa monja amin'izao fotoan-tsarotra izao. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
facebook (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Vesta (nitranga in-2) : Isan'ireo nandefa izany fitarainana hitadiavana porofo izany ny Vesta Team, tamin'ny lalaon' izy ireo sy ny Assm ary ny Cospn. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
airing (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
courageous (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
@elijahzarwan: Al-Jazeera Egypt staff resign after ‘biased coverage': Resigning June 1 wld have been courageous http://tinyurl. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nosantarina (nitranga in-1) : Anisan'ny zava-baovao ka nosantarina tao Toliara kosa ny solosaina manokana ho an'ny ankizy. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
ASSM (nitranga in-1) : R A
Ireo lalao mbola tsy vita Tana Formation # IFC Tana Formation # Adema Adema # ASSM Cospn # Hezami Ajesaia # Cosfa Cosfa # Vesta. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
zon' (nitranga in-1) : Ankoatra ny boky miresaka ny tontolo iainana, ny tanora sy ny fandraharahana, ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary fitaovana fianarana teny anglisy…, dia mampiavaka ity foibe ara-kolotsaina ity ihany koa reo fitaovana mampiasa ny teknolojia vaovao, toy ny boky elektronika “kindle” azo amakiana karazam-boky aman-jatony maro; ny I-pad sy solosaina ary horonantsary isan-karazany mampiseho ny maha zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Nanongana (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
dolara (nitranga in-1) : Mitentina 1 tapitrisa dolara mahery no tetibidin'ireo asa fampandrosoana ny faritra tsirairay ireo », hoy ihany i Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
presenter (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hifantenana (nitranga in-1) : “Amin' ny Can 2014 no tena hifantenana ireo ekipa roa hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao any Londres amin'ny taona 2015. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
fandinihina (nitranga in-1) : Mila 25 tapitrisa Euros eo ho eo ity klioba ity hahafahany mijanona ho diviziona faharoa, araka ny vokatry ny fandinihina nataon' ny sehatra fanaraha-maso ny fitantanana (DNCG) tamin'ny 26 jona lasa teo. (Any andafin’ny riaka)
Fadhel (nitranga in-1) : Mpanao gazety iray, Wesam Fadhel nitatitra ny fialany ao amin'ny sata Facebook [ar]. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Didier (nitranga in-3) : Araka ny voalazan'ny loharanom-baovao iray dia mikendry ny ho Filohan'ny tetezamita miaraka amin'i Andry Rajoelina ny Filoha teo aloha, Didier Ratsiraka, raha ny fikatsahana ny fiverenany malalaka eto an-tanindrazana no mahamaika an'i Marc Ravalomanana. (Sombiny)
fampiaranarana (nitranga in-1) : «Io antony io no nahatonga ny safidy tany amin'ny Sai'h, izay manana ny mampiavaka azy amin'ny tontolon'ny dihy», araka ny fanazavan'i Ariry Andriamoratsiresy, sady mpandihy no mpitarika ihany koa ny kaompania sy toerana fampiaranarana dihy Rary. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
fondamentalista (nitranga in-1) : Lasa toy ny Fox News ho an'ny Repoblikana fondamentalista ao Etazonia hatry ny taona maro ny fantsona Al Jazeera ho an'ny Islamista ao Ejipta tao ho ao. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
traikefany (nitranga in-1) : Nanamarika anefa ny Masoivoho Amerikanina fa mitombo hatrany ny fitaovana ampiasaina sy ny teknolojia vaovao azon'ny mpitsidika ampiasaina, ahafahany manitatra ny fahalalany sy traikefany. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
video (nitranga in-1) : Eo koa ny kilalao video “wii” ahafahan'ny tanora sady milalao no manitatra ny fahalalany eo amin'ny lafiny tantara sy jeografia. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
what (nitranga in-1) : com/mjculx8
Nametra-pialana ny ekipa Al-Jazeera Ejipta taorian'ny ‘tati-baovao mitongilana': Ny fialana tamin'ny 1 jona no mety ho fampisehoana herim-po Ary nanampy i Nezar AlSayyad:
@nezar: Al Jazeera Cable has recently become to Islamists in Egypt what Fox News has been to fundamentalist Republicans in the US for many years. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
taonan' (nitranga in-1) : isan'ireo ekipa nandefa fitarainana ny Tana Formation
Aorian'ny valin'ny fitarainana nataon'ireo klioba, momba ny taonan'ireo mpilalao sy ny andro farany amin'ny sabotsy izao, no hamantarana ireo ekipa efatra hiatrika ny «Poule des AS», eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
AlJazeera' (nitranga in-2) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
Sombin-taratasy fandrahonana nalatsaka akaikin'ny biraon'ny AlJazeera tao Kairo – tanana mihosin-drà sy tsipika ‘lainga sy lainga hafa' #Ejipta Mamono firenena ny fakantsary mandainga, hoy ny fivakin'ny trakitra natsipy teo ivelan'ny biraon'ny Al Jazeera tao Kairo. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Rawya (nitranga in-1) : Tany amin'ny fivoaran-draharaha hafa i Rawya Rageh, mpitatitr'i Al Jazeera ao Kairo, nisioka sarin-taratasy fandrahonana nalatsaka teo ivelan'ny biraon'ny Al Jazeera's Cairo tao Kairo androany:
Taratasy fandrahonana nalatsaka teo ivelan'ny biraon'ny Al Jazeera tao Kairo. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
near (nitranga in-2) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
nomen' (nitranga in-1) : Amin'ny alakamisy ho avy izao no hahafantarana izany, izay fotoana nomen' ny DNCG hanoloran'ny filohan'ny klioba io mari- bola io, raha tsy izany dia mety hidina amin'ny diviziona fahatelo na ny « National » ny klioba. (Any andafin’ny riaka)
talen' (nitranga in-1) : Io fiara iray io izay mitondra ny talen'ilay kaompania mpanatsinjara solika. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Ivato (nitranga in-3) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Sombiny)
Fort (nitranga in-1) : naroso ho amin'ny sabotsy 13 jolay ny lalao famaranana fifaninanana baolina kitra, “Grand Tournoi taxi foot”, hatao eny amin'ny kianjam-pasika, eny Fort Duchesne. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
solontenan' (nitranga in-1) : Isan'ireo niatrika ity fivoriana ity ihany koa ny solontenan'ny Fiadidiana ny tetezamita, ny fiadidiana ny Praiminisitra, ny Cenit, ny avy amin'ny parlemantan'ny tetezamita. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
hisintahan' (nitranga in-1) : Juliano Randrianja
Mbola mametraka olana hatrany ireo kandidà telo Hatramin'ny fiafaran' ny fivoriana omaly ity aloha dia mbola tsy nahitan'ireo vondrona politika marimaritra iraisana ny momba ny fitakian'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny amin'ny tokony hisintahan'ireo kandidà telo dia ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajo-elina, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Rava-lomanana. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
fivadibaihan' (nitranga in-1) : mbola ao anatin'ny fivadibaihan'ny toetr'andro hatrany isika. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
Ratsiraka (nitranga in-4) : mikatsaka mafy ny tombontsoany ny Amiraly Ratsiraka
Tsy manaiky mihitsy. (Sombiny)
mampety (nitranga in-1) : Raha mifanohitra amin' izay anefa no ataontsika dia izay Filoham-pirenena lany eo izany no hanao Lalàm-panorenana mifanaraka amin'izay tiany sy mampety azy eo. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
higadona (nitranga in-2) : Anio no higadona eny Ivato ny mpitarika ny fanelanela-nana iraisam-pirenena amin'ny krizy malagasy na ny Gic-M sy ny iraky ny vondrona Sadc, Dr Leonardo Simao. (Sombiny)
hours (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
feona (nitranga in-1) : Ity tetikasa ity no niteraka ny tarika Androta, ka ankoatra ny dihy hoentin'i Ariry sy Sai'h dia hisy ny fitendrena mivantana ny feon-kira sy feona amponga handi­hizan'izy mirahalahy. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
nisian' (nitranga in-1) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
mpitsi­kera (nitranga in-1) : Tsy misy anavahana io, fa ireo mpitsi­kera ankehitriny, dia izay efa nanao ny ataony teo aloha na ny mody hendry ankehitriny ihany. (Fitsidiham-pahitra !)
along (nitranga in-1) : Nanambara ny tambajotra hoe:
Al Jazeera's live Egypt service have been taken off air along with several other TV channels. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Nezar (nitranga in-1) : com/mjculx8
hahitan' (nitranga in-1) : Ity farany izay mirary sy miandrandra ny mba hahitan'i Madaga-sikara fitoniana sy fandro-soana ao anatin'izao fotoan-tsarotra diavin'ny Malagasy izao. (Sombiny)
tompondakan' (nitranga in-3) : isan'ireo ekipa nandefa fitarainana ny Tana Formation
Aorian'ny valin'ny fitarainana nataon'ireo klioba, momba ny taonan'ireo mpilalao sy ny andro farany amin'ny sabotsy izao, no hamantarana ireo ekipa efatra hiatrika ny «Poule des AS», eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Voafaokan' (nitranga in-1) : Voafaokan'ny kodiarana aorian'ilay kamiao ilay sarety ka nihantona niaraka tamin' ny baravy entin-tanana mihitsy ilay lehilahy mpitondra azy. (Sombiny)
Repoblikana (nitranga in-1) : Lasa toy ny Fox News ho an'ny Repoblikana fondamentalista ao Etazonia hatry ny taona maro ny fantsona Al Jazeera ho an'ny Islamista ao Ejipta tao ho ao. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Nitondra (nitranga in-1) : Nitondra basy hafa ihany koa anefa ireo jiolahy satria nahitana balana basy »Mas 36 » ihany koa niparitaka teo», hoy ihany ny zandary. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
taksibe (nitranga in-2) : namoa-doza indray ny taksibe. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
Randriantefiarison (nitranga in-1) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
When (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
bloodied (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
hamaha (nitranga in-1) : Nohizingizinin'ny Filoha teo aloha Zafy Albert indray raha nanokatra an'ity fivoriana ity fa « ny fana- ovana fitsapan-kevi-bahoaka hisafidianana Lalàm-pano-renana no tokony hatao mialoha raha tena hamaha ny olana ». (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
hotely (nitranga in-1) : Omaly no niditra teny amin'ny hotely fandraisam-bahiny (Paon d'Or sy Central Hotel ary Plazza) handraisana azy, ireo firenena efatra mandray anjara rehetra amin'ity fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny baolina lavalava vondrona A. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
hihaonan' (nitranga in-1) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
lefitry (nitranga in-2) : Araka ny fanazavan'i Velompa-nahy Aristide, filoha lefitry ny komity mpanara-maso ny fampiharana ny sori-dàlana (Csc) izay tompon' antoka tamin'ny famoriana ireto vondrona politika ireto dia «tokony ho tafatsan- gana ao anatin'ny telo na efatra herinandro eo ho eo ity fitsarana misahana ny fifidianana vaovao ity». (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Fiara (nitranga in-1) : Fiara taksiborosy iray avy any Antsirabe ho any Fianarantsoa no nosakanan'ny jiolahy tao Ivato Centre ao atsimon'Ambositra, omaly vao maraim-be tokony ho tamin'ny 3 ora sy fahefany. (Sombiny)
from (nitranga in-3) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nanatontosana (nitranga in-1) : Any Toliara indray, nanomboka ny 04 jolay teo, no nanatontosana ny foibe ara-kolotsaina mitety vohitra, karakarain'ny Masoivoho Amerikanina. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
footage (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
ma­hery (nitranga in-1) : Dahalo 10 lahy izy ireo no niaraka tamin' izany ka vola mitentina Ar 1 tapitrisa ma­hery no lasany, niampy fin­day iray. (Sombiny)
June (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
amerikaninana (nitranga in-1) : efa nitety faritra maro ny foiben-kolontsaina amerikaninana
Tanàna faha-24 handalovany tao anatin'ny roa taona. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Lens (nitranga in-4) : bAOLINA KITRA-L2 FRANTSAY
Tsy mbola naharay karama ny mpilalaon' ny RC Lens Mandalo fotoan-tsarotra eo amin'ny lafiny vola ny ekipan'ny RC Lens, izay misy an'i Bolida sy hifindran'i Dafe, amin' izao fotoana izao. (Any andafin’ny riaka)
hamantarana (nitranga in-1) : isan'ireo ekipa nandefa fitarainana ny Tana Formation
live (nitranga in-3) : Nanambara ny tambajotra hoe:
camera (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
correspondents (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
tranomboky (nitranga in-1) : Ny tranoben'ny tanora ao Ankilifaly no mampiantrano izany mandritra ny iray volana ary hisian'izay rehetra hita ao anatin'ireny tranomboky ireny. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
hotanterahina (nitranga in-1) : «Raha tratra soa aman-tsara io fe-potoana io dia tokony hotanterahina any amin'ny faramparan'ny volana septambra any ho any ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena», araka ny fanamarihan'ny filoha lefitry ny Csc hatrany, taorian'ny fihaonana tamin' ireto vondrona politika ireto. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
mora (nitranga in-2) : Ny vahoaka sahirana sy ny vontom-pinoana angamba izany no mora rebirebena sy mora hanaovana fandemen-tsafidy!
Fa inona moa izay ianao handalovany indray na indroa monja amin'izao fotoan-tsarotra izao. (Fitsidiham-pahitra !)
today (nitranga in-1) : Toy izao ny nosoratany:
I resigned from Al Jazeera today. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Nanamarika (nitranga in-1) : Nanamarika anefa ny Masoivoho Amerikanina fa mitombo hatrany ny fitaovana ampiasaina sy ny teknolojia vaovao azon'ny mpitsidika ampiasaina, ahafahany manitatra ny fahalalany sy traikefany. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Sai' (nitranga in-4) : Masaka ny nahandro ka hiaraka hiangaly ilay soradihy «Banja», etsy amin'ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) Analakely, ny harivan'ny alakamisy 11 jolay izao, i Ariry sy Sai'h. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
StumbleUpon (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
diavy (nitranga in-1) : Ity farany izay mirary sy miandrandra ny mba hahitan'i Madaga-sikara fitoniana sy fandro-soana ao anatin'izao fotoan-tsarotra diavin'ny Malagasy izao. (Sombiny)
Ankejabe (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
DNCG (nitranga in-1) : Amin'ny alakamisy ho avy izao no hahafantarana izany, izay fotoana nomen' ny DNCG hanoloran'ny filohan'ny klioba io mari- bola io, raha tsy izany dia mety hidina amin'ny diviziona fahatelo na ny « National » ny klioba. (Any andafin’ny riaka)
tanànan' (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
hivarotana (nitranga in-1) : Rehefa omen'ny kaominina toerana hivarotana izahay dia mety aminay”, hoy ireo mpivarotra sasany nanontaniana omaly. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
friperie (nitranga in-1) : mpivarotra friperie sy voankazo ary legioma ny mpivarotra ao anatin'ny tsenan'ny “Bagdad”
Tapitra ny fifanarahana. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
nampandro (nitranga in-1) : Tsy nisy nahalala ny nanjo an'ilay zazavavikely raha tsy ny reniny efa nampandro azy ny hariva ka nahatsikaritra zavatra hafahafa. (Sombiny)
hidirana (nitranga in-1) : 500 metatra tsy hidirana an'Iavoloha, halina tokony ho tamin'ny 8 ora no nifatratra tany an-tanimbary ny fiara mpitatitra iray amin'ny zotra 187. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
dimbiasan' (nitranga in-1) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
niantsoan' (nitranga in-1) : Hidinika ny vahaolana hialana amin'ny krizy lavareny no niantsoan'ity ankolafy ity azy ireo handray anjara amin'ny antsoin'izy ireo hoe »seminera nasionaly ». (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
nifatrarany (nitranga in-1) : Niala io indrindra no nampivadibadika azy ka nifatrarany tany an-tanimbary», hoy ny fitantaran'ny olona iray izay nanatri-maso ny zava-nitranga teny an-toerana. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
naolan' (nitranga in-1) : Zazavavikely kely vao 6 taona monja no voalaza fa naolan'ny zazalahy 11 taona, ny zoma teo, tany Andovinjo Mahajanga. (Sombiny)
this (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
work (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Andovinjo (nitranga in-1) : Zazavavikely kely vao 6 taona monja no voalaza fa naolan'ny zazalahy 11 taona, ny zoma teo, tany Andovinjo Mahajanga. (Sombiny)
notapahy (nitranga in-1) : «Tazonina ihany koa ny filaharany araka ny efa notapahin'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny tetezamita (Cenit) sy ireo manam-pahaizana avy amin'ny Firenena mikambana», araka ity fehin-kevitra nivoaka avy eny Andrai-narivo ity ihany. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
tanàna (nitranga in-1) : Rehefa afaka 7 km niala ny tanàna anefa dia nisy lehilahy efatra nametraka sakana teo amin'ny lalana. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
fundamentalist (nitranga in-1) : com/mjculx8
kianjaben' (nitranga in-1) : ANDRANA
Nanao fizahana ifotony teny amin'ny kianjaben' i Mahamasina omaly ny i-Tapakila, izay orinasa miantoka ny fanamarinana ny tapakila elektronika. (Anjoron- »CAN »)
Ambohijanahary (nitranga in-1) : tonga nanokatra ny fivorian'ny ankolafiny ny Pr Zafy Albert
An'arivony ireo mpi-zaika namaly ny antson'ny ankolafy Zafy tetsy amin' ny Mon Goûter Andrefan' Ambohijanahary, omaly. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
namonjy (nitranga in-1) : Raha ny fantatra dia fianakaviana iray avy namonjy famadihana no tao anatin'ity fiara ity. (Sombiny)
Jerry (nitranga in-3) : amin'ny alalan'ilay fandaharana “Misy raha”, ao amin'ny fahitalavitra tsy miankina iray eto an-drenivohitra sy amin'ny fahitalavitra amin'ny zana-bolana, no hitondran'i Jerry Marcoss ny fanohanany ireo mpanao hatsikana. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
dropped (nitranga in-2) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
Kombouaré (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory anefa no efa nanambara izy ireo fa hanakarama an'i Kombouaré, mpanazatra ny PSG fahiny, hitantana io ekipa io ao amin'ny «ligue 2». (Any andafin’ny riaka)
klioban' (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
AlJazeera (nitranga in-2) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
Wesam (nitranga in-1) : Mpanao gazety iray, Wesam Fadhel nitatitra ny fialany ao amin'ny sata Facebook [ar]. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
fahatarany (nitranga in-1) : «Azo vinavinaina ho any amin'ny faramparan' ny volana novambra na fara fahatarany amin'ny fiandohan'ny volana desambra any ho any ny fifidianana Filoham-pire-nena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka», hoy ihany i Velompanahy Aristide. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Antsirabe (nitranga in-1) : Fiara taksiborosy iray avy any Antsirabe ho any Fianarantsoa no nosakanan'ny jiolahy tao Ivato Centre ao atsimon'Ambositra, omaly vao maraim-be tokony ho tamin'ny 3 ora sy fahefany. (Sombiny)
Tsaravavaka (nitranga in-1) : Trano fito no nasesin'ny jiolahy notafihina tany Tsaravavaka Vinany Mandoto, ny sabotsy 6 jolay teo tokony ho tamin' ny 9 ora sy sasany alina. (Sombiny)
hangatsiaka (nitranga in-2) : Manomboka any amin'ny alakamisy ka hatramin'ny alahady any no mety hidina na hiverina hangatsiaka kely indray ny andro eto afovoan-tany. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
Amira (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
handi­hizan' (nitranga in-1) : Ity tetikasa ity no niteraka ny tarika Androta, ka ankoatra ny dihy hoentin'i Ariry sy Sai'h dia hisy ny fitendrena mivantana ny feon-kira sy feona amponga handi­hizan'izy mirahalahy. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
place (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hamindrana (nitranga in-1) : Toerana eny amin'ny manodidina ihany no hamindrana azy ireo satria eny no efa mahazatra ny mpivarotra sy ny mpanjifany”, raha ny fanazavana hatrany. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
dianana (nitranga in-1) : « Milaza hatrany izahay fa tsy maintsy mifidy Lalàm-panorenana aloha isika vao miroso amin'ny fifi- dianana Filoham-pirenena. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
Ampasika (nitranga in-1) : Lehilahy iray voatondro ho mpamatsy rongony saron'ny polisy tetsy Ampasika ny sabotsy 6 jolay teo no naiditra am-ponja vonjimaika rehefa avy natolotra ny Fampanoavana omaly. (Sombiny)
Assm (nitranga in-1) : Isan'ireo nandefa izany fitarainana hitadiavana porofo izany ny Vesta Team, tamin'ny lalaon' izy ireo sy ny Assm ary ny Cospn. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
Nangony (nitranga in-1) : Nangonin'i R A. (Anjoron- »CAN »)
after (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
Androta (nitranga in-2) : Ity tetikasa ity no niteraka ny tarika Androta, ka ankoatra ny dihy hoentin'i Ariry sy Sai'h dia hisy ny fitendrena mivantana ny feon-kira sy feona amponga handi­hizan'izy mirahalahy. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
sehatry (nitranga in-1) : Manamafy ny fidiran'i Jerry Marcoss eo amin'ny sehatry ny famokarana izao ataony amin'ny fahitalavitra izao. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
mitongilana' (nitranga in-1) : com/mjculx8
mampiantrano (nitranga in-1) : Ny tranoben'ny tanora ao Ankilifaly no mampiantrano izany mandritra ny iray volana ary hisian'izay rehetra hita ao anatin'ireny tranomboky ireny. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
naratra (nitranga in-2) : Olona dimy no naratra tamin'izany ka ny iray no tena voa mafy. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
Barphil (nitranga in-1) : Barphil. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
hanimba (nitranga in-1) : Nambaran'ireo mponina fa na tapaka na midina ambany dia ambany ny tanjaky ny herinaratra ka ahiana hanimba entana. (Jiro tapaka)
nalefa (nitranga in-1) : mIVOHA ALAHADY
Efa nanomboka nalefa omaly, tamin'ny alalan' ny paositra, avokoa ny taratasy fiantsoana amin'ny fanadinana Bakalorea, ho an'ny mpiadina Antananarivo sy ny manodidina. (Tapatapany)
Islamists (nitranga in-1) : com/mjculx8
Marcel (nitranga in-2) : Hiray vondrona amin'i Nouvelle Zélande izay tompondaka eran-tany amin'ny taona 2014, raha mbola hiatrika lalao sakana amin'ny solontena Aziatika hafa ny laharana faharoa”, hoy i Marcel Rakotomalala, filohan' ny federasiona malagasin' ny baolina lavalava. (Anjoron- »CAN »)
Cepe (nitranga in-1) : Hisantatra izany ny Cepe izay hatao amin'ny talata 16 jolay izao. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
Makis (nitranga in-1) : “Samy tsara avokoa ireo mpilalao rehetra nantsoina ho an'ny ekipam-pirenena malagasy, indrindra lava ihany koa ny fanomanana, ka sarotra ny nanao ny fifantenana teo amin'ny ora farany”, hoy i Berthin Rafalimanana na i Berthin Zoto, mpanazatra ny Makis. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Radio (nitranga in-1) : ROA SEGAONDRA
Resigning (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
Islamista (nitranga in-1) : Lasa toy ny Fox News ho an'ny Repoblikana fondamentalista ao Etazonia hatry ny taona maro ny fantsona Al Jazeera ho an'ny Islamista ao Ejipta tao ho ao. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
niparitaka (nitranga in-1) : Nitondra basy hafa ihany koa anefa ireo jiolahy satria nahitana balana basy »Mas 36 » ihany koa niparitaka teo», hoy ihany ny zandary. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Belone (nitranga in-1) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
najanona (nitranga in-1) : Isan'ireo najanona i Chabal (US Ikopa), Haja (3FB), Dera (Savonnerie) ary Serge (FTM). (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
ordre (nitranga in-1) : Milaza ny hangataka « ordre de mission » ireto Lehiben'ny faritra voasakana ireto. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
mission (nitranga in-2) : « Tsy nanao fangatahana »ordre de mission » izahay satria pasipaoro tsotra no nampiasainay fa tsy pasipaoro natokana ho amina asa. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
manela­nelana (nitranga in-1) : Manome aina sy ala vonkona ary manela­nelana ny hira sy ny resaka ihany anefa ny tontolon'ny hatsikana. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
notafihina (nitranga in-1) : Trano fito no nasesin'ny jiolahy notafihina tany Tsaravavaka Vinany Mandoto, ny sabotsy 6 jolay teo tokony ho tamin' ny 9 ora sy sasany alina. (Sombiny)
Randrianja (nitranga in-2) : Juliano Randrianja
Sadc (nitranga in-1) : Anio no higadona eny Ivato ny mpitarika ny fanelanela-nana iraisam-pirenena amin'ny krizy malagasy na ny Gic-M sy ny iraky ny vondrona Sadc, Dr Leonardo Simao. (Sombiny)
Escopol (nitranga in-1) : Isan'izany ny Hpm, ny Mdm, ny Arema, ny Tgv, ny ankolafy Ravaloma-nana, ny Escopol, ny Les as, ny Monima, ny Udr-Fano-vana. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
niasa (nitranga in-1) : Mampalahelo fa nieritreritra niasa tao amin'ny toerana noheveriko ho ananana fitokisana aho saingy [mahatsapa ankehitriny] fa ny fitokisana azy dia mifototra amin'ny fijoroana ara-politika. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
tetibidy (nitranga in-1) : Mitentina 1 tapitrisa dolara mahery no tetibidin'ireo asa fampandrosoana ny faritra tsirairay ireo », hoy ihany i Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
Venance (nitranga in-2) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
twitter (nitranga in-2) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh tao amin'ny twitter. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Natao (nitranga in-1) : Natao ny fanarahana ny dian-tongotra ka tany anaty alan'Isalo no very dia tanteraka ireo zandary», hoy ny nambaran'ny zandary avy ao Ilakaka, izay mandray an-tanana ny famotorana. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Elijah (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
navotsotra (nitranga in-1) : ” Notazonina roa andro izy ary navotsotra rehefa handoa “onitra”. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
2015 (nitranga in-1) : “Amin' ny Can 2014 no tena hifantenana ireo ekipa roa hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao any Londres amin'ny taona 2015. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
2014 (nitranga in-2) : “Amin' ny Can 2014 no tena hifantenana ireo ekipa roa hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao any Londres amin'ny taona 2015. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Doro (nitranga in-1) : Somary teritery noho ny fisian'ny mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana ny arabe ka izay no nahavoafaoka an'ilay mpitondra sarety
Doro trano. (Sombiny)
Ejipsiana (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
Sina (nitranga in-4) : nandefa taratasy ho an'ny minisiteran'ny Fampianarana ambony, omaly, ireo mpianatra malagasy any Sina. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
hanombohan' (nitranga in-1) : Nampahatsiahy ihany koa ny Ofisin'ny Bakalorea Antananarivo ny amin'ny tokony hahatongavan'ny mpiadina 30 minitra mialoha ny hanombohan' ny fanadinana. (Tapatapany)
Cable (nitranga in-1) : com/mjculx8
mpitondrateniny (nitranga in-1) : Voampanga ho nifamato-dra tamin'ny Mpirahalahy Miozolomana ka nanao ho mpitondrateniny ity fantsona miorina ao Qatar ity. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
ohatran' (nitranga in-1) : Napetraka foana io Vaomiera sy Filankevitra na Fitsarana manokana etsy sy eroa io, fa jerem-potsiny ohatran'ny olom-pady ny fanaraha-maso sy fananarana, na izay mba tokony fampitandremana hataon'ny manampahefana amin'izany. (Fitsidiham-pahitra !)
resigned (nitranga in-1) : Toy izao ny nosoratany:
Tanàna (nitranga in-1) : efa nitety faritra maro ny foiben-kolontsaina amerikaninana
they (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Nilaza (nitranga in-3) : Nilaza ho efa naharay izany taratasy nalefan'ireo mpianatra any Sina izany ny eo anivon'ny minisiteran' ny Fampianarana ambony. (Tapatapany)
foot (nitranga in-1) : Ankoatra ireo lalao telo ho hita amin'ny sabotsy ireo, dia hanomboka ny 20 jolay ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ny lalao Taxi foot manaraka, eny amin'ity kianjam-pasika ity ihany, araka ny fanazavana azo avy amin'ny mpikarakara. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
mampahafantatra (nitranga in-1) : Sady mampahafantatra ny vokatra na fandaharam-potoanany izy ireo mandritra izany”, hoy ny fanazavan'i Jerry Marcoss. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
natsipy (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
demokrasia (nitranga in-1) : Ankoatra ny boky miresaka ny tontolo iainana, ny tanora sy ny fandraharahana, ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary fitaovana fianarana teny anglisy…, dia mampiavaka ity foibe ara-kolotsaina ity ihany koa reo fitaovana mampiasa ny teknolojia vaovao, toy ny boky elektronika “kindle” azo amakiana karazam-boky aman-jatony maro; ny I-pad sy solosaina ary horonantsary isan-karazany mampiseho ny maha zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
channels (nitranga in-1) : Nanambara ny tambajotra hoe:
vitany (nitranga in-1) : Nitsoaka an-daharana kosa ny United FC ka nahatonga ny ligy hanafoana ireo vokatra tamin'izay lalao vitany. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
azon' (nitranga in-2) : Antsasaka ondry iray no azon'izay ekipa mandresy eo », hoy Randrianiaina John, mpandrindra ny fifaninanana Fiteramana. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
lazay (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
Lamba (nitranga in-1) : Lamba tavoahangy
Ny lamba tavoahangy amidy amin'ny metatra, Ar 3 000, sisa no tena be mpividy raha ny fanadihadiana hatrany. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
Cairo (nitranga in-2) : Tany amin'ny fivoaran-draharaha hafa i Rawya Rageh, mpitatitr'i Al Jazeera ao Kairo, nisioka sarin-taratasy fandrahonana nalatsaka teo ivelan'ny biraon'ny Al Jazeera's Cairo tao Kairo androany:
arrested (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hitondran' (nitranga in-1) : amin'ny alalan'ilay fandaharana “Misy raha”, ao amin'ny fahitalavitra tsy miankina iray eto an-drenivohitra sy amin'ny fahitalavitra amin'ny zana-bolana, no hitondran'i Jerry Marcoss ny fanohanany ireo mpanao hatsikana. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
tapakila (nitranga in-3) : hOSOKA
Avy hatrany dia any amin' ny polisy ireo rehetra tratra manao tapakila hosoka amin'ity fiadiana ny amboaran'i Afrika eo amin'ny baolina lavalava ity. (Anjoron- »CAN »)
nanambara (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory anefa no efa nanambara izy ireo fa hanakarama an'i Kombouaré, mpanazatra ny PSG fahiny, hitantana io ekipa io ao amin'ny «ligue 2». (Any andafin’ny riaka)
Mitovitovy (nitranga in-1) : Mitovitovy ihany koa ny nambaran'ireo mpitondra fiangonana ny amin'ny famadihana. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
Guillaume (nitranga in-2) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
nitondra (nitranga in-2) : «Tonga tamin'io fotoana io ihany koa ireo tsy mankasitraka ilay mpitandrina vaovao ary nitondra sora-baventy izy ireo. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
nosoloina (nitranga in-2) : taorian'ny fiverenana avy tany Afrika Atsimo, dia nosoloina an'i Jôda (FTM) i Ibrahim (IRC), araka ny lisitra navoakan'ny mpanazatra nasionaly, omaly. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
ligy (nitranga in-1) : Nitsoaka an-daharana kosa ny United FC ka nahatonga ny ligy hanafoana ireo vokatra tamin'izay lalao vitany. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
nanokatra (nitranga in-2) : tonga nanokatra ny fivorian'ny ankolafiny ny Pr Zafy Albert
cameras (nitranga in-1) : Al Jazeera cameras are in Tahrir live now. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Chine (nitranga in-2) : « Tsy maintsy lasa izahay na inon-kidona na inon-kihatra », hoy i Saina Michel, Lehiben'ny faritra Ana-lanjirofo, omaly, nidrikina ny tsy maintsy handehanan'izy ireo any Chine, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo namany, teny amin' ny Môtel Anosy. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
fampihaonana (nitranga in-1) : Ny Filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina aloha dia efa nanizingizina fa « raha mbola hanitatra ny tetezamita indray no foto-dresaka amin'ity fampihaonana ity dia tsy hanaiky ny tenany ». (Fampihaonan’ny FFKM – Miady ho Filohan’ny tetezamita koa Ratsiraka)
Nanjary (nitranga in-1) : Nanjary manana olana amin'ny fianakaviana mihitsy aho noho izay tsy nanekeko ny hanao famadihana izay intsony”, hoy ny raim-pianakaviana iray. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
fiovaovan' (nitranga in-1) : Nampahatsiahy hatrany anefa ny avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro fa tokony hivonona hanao mafana ihany noho ny fiovaovan' ny toetr'andro. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
Noeline (nitranga in-1) : Ankoatra ny fahasahiranan'ny olona dia eo koa ny fisian'ireo fiangonana maro miorina, izay mandrara ny fanaovana famadihana ny ankamaroany”, hoy Rajaofera Noeline, mpivarotra lambamena efa ho 30 taona mahery etsy Anosy. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
nitohy (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny dia nandala karazan-dihy samihafa i Sai'h, niainga tany amin'ny hip-hop, nitohy tamin'ny fianarana ireo dihin-drazana afrikanina, nialoha ny nidirany tamin' ny dihy maoderina. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
Dafe (nitranga in-2) : bAOLINA KITRA-L2 FRANTSAY
Hussainy (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Chabal (nitranga in-1) : Isan'ireo najanona i Chabal (US Ikopa), Haja (3FB), Dera (Savonnerie) ary Serge (FTM). (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
hialana (nitranga in-1) : Hidinika ny vahaolana hialana amin'ny krizy lavareny no niantsoan'ity ankolafy ity azy ireo handray anjara amin'ny antsoin'izy ireo hoe »seminera nasionaly ». (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
reason (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
tenany (nitranga in-1) : Ny Filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina aloha dia efa nanizingizina fa « raha mbola hanitatra ny tetezamita indray no foto-dresaka amin'ity fampihaonana ity dia tsy hanaiky ny tenany ». (Fampihaonan’ny FFKM – Miady ho Filohan’ny tetezamita koa Ratsiraka)
voaraiko (nitranga in-1) : “Ny fampianarana voaraiko tamin'ny fiangonana nifindrako no tsy nanaovako famadihana intsony. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
naroso (nitranga in-1) : naroso ho amin'ny sabotsy 13 jolay ny lalao famaranana fifaninanana baolina kitra, “Grand Tournoi taxi foot”, hatao eny amin'ny kianjam-pasika, eny Fort Duchesne. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
vonkona (nitranga in-1) : Manome aina sy ala vonkona ary manela­nelana ny hira sy ny resaka ihany anefa ny tontolon'ny hatsikana. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
nahita (nitranga in-1) : Vao nahita izany izy ireo dia niezaka nanodina ny fiara. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Ilakaka (nitranga in-2) : Natao ny fanarahana ny dian-tongotra ka tany anaty alan'Isalo no very dia tanteraka ireo zandary», hoy ny nambaran'ny zandary avy ao Ilakaka, izay mandray an-tanana ny famotorana. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Ankilifaly (nitranga in-1) : Ny tranoben'ny tanora ao Ankilifaly no mampiantrano izany mandritra ny iray volana ary hisian'izay rehetra hita ao anatin'ireny tranomboky ireny. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Juliano (nitranga in-2) : Juliano Randrianja
National (nitranga in-1) : Amin'ny alakamisy ho avy izao no hahafantarana izany, izay fotoana nomen' ny DNCG hanoloran'ny filohan'ny klioba io mari- bola io, raha tsy izany dia mety hidina amin'ny diviziona fahatelo na ny « National » ny klioba. (Any andafin’ny riaka)
hametrahana (nitranga in-1) : “Tamin'ny 2003 no nanao fifanarahana tamin'ny orinasa tompon'ny tany ny Cua mba hametrahana vonjimaika ireo mpivarotra, rehefa noesorina tetsy amin'ny kianja Rafalimanana, Ambodin'Isotry. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
hifindran' (nitranga in-1) : bAOLINA KITRA-L2 FRANTSAY
Cenit (nitranga in-1) : Isan'ireo niatrika ity fivoriana ity ihany koa ny solontenan'ny Fiadidiana ny tetezamita, ny fiadidiana ny Praiminisitra, ny Cenit, ny avy amin'ny parlemantan'ny tetezamita. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Goûter (nitranga in-1) : tonga nanokatra ny fivorian'ny ankolafiny ny Pr Zafy Albert
nosamboriny (nitranga in-1) : Ny tatitra avy amin'ireo masoivohonay no nilaza fa nitranga izany nandritra ny fampitana ny mivantana ka nakorontan'ny mpitandro ny filaminana ny trano fanorenana ary nosamboriny ny mpanolotra, ny nasaina ary ny mpamokatra ny fandaharana. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hampitoviana (nitranga in-1) : Natsidik'ireo mpianatra ihany koa fa tokony hampitoviana avokoa ny mpianatra mandranto fianarana rehetra, toy ny any Canada, Etazonia ary Frantsa, … Mahatratra 274 ireo mpianatra malagasy any Sina ary ny 10 tamin'ireo no tonga tany alohan'ny taona 2011- 2012, raha taty aoriana avokoa ny 264. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
nanodina (nitranga in-1) : Vao nahita izany izy ireo dia niezaka nanodina ny fiara. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Rakotomalala (nitranga in-1) : Hiray vondrona amin'i Nouvelle Zélande izay tompondaka eran-tany amin'ny taona 2014, raha mbola hiatrika lalao sakana amin'ny solontena Aziatika hafa ny laharana faharoa”, hoy i Marcel Rakotomalala, filohan' ny federasiona malagasin' ny baolina lavalava. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
voarainay (nitranga in-1) : »Ny vatsim-
pianarana enim-bolana 2011-2012 ihany no voarainay. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
Pochard (nitranga in-1) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
pianarana (nitranga in-1) : »Ny vatsim-
faramparan' (nitranga in-2) : «Raha tratra soa aman-tsara io fe-potoana io dia tokony hotanterahina any amin'ny faramparan'ny volana septambra any ho any ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana Filoham-pirenena», araka ny fanamarihan'ny filoha lefitry ny Csc hatrany, taorian'ny fihaonana tamin' ireto vondrona politika ireto. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Ikopa (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
handalovany (nitranga in-2) : Ny vahoaka sahirana sy ny vontom-pinoana angamba izany no mora rebirebena sy mora hanaovana fandemen-tsafidy!
Fa inona moa izay ianao handalovany indray na indroa monja amin'izao fotoan-tsarotra izao. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
delicious (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Randriatefiarison (nitranga in-1) : Tsy izahay mihitsy no hanohitra ny fitondram-panjakana satria izahay koa ao anatin'izany », hoy kosa Randriatefiarison Guillaume Venance, Lehiben' ny faritra Anosy. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
fitokisana (nitranga in-2) : Mampalahelo fa nieritreritra niasa tao amin'ny toerana noheveriko ho ananana fitokisana aho saingy [mahatsapa ankehitriny] fa ny fitokisana azy dia mifototra amin'ny fijoroana ara-politika. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
ekenay (nitranga in-1) : Tsy ekenay ny fampodiana
raha tsy mazava ny fandoavana io 18 volana io satria efa be loatra ny vola laninay sy ny ray amn-dreninay taty », hoy ireo mpianatra any Sina. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
service (nitranga in-1) : Nanambara ny tambajotra hoe:
Centre (nitranga in-1) : Fiara taksiborosy iray avy any Antsirabe ho any Fianarantsoa no nosakanan'ny jiolahy tao Ivato Centre ao atsimon'Ambositra, omaly vao maraim-be tokony ho tamin'ny 3 ora sy fahefany. (Sombiny)
fin­day (nitranga in-1) : Dahalo 10 lahy izy ireo no niaraka tamin' izany ka vola mitentina Ar 1 tapitrisa ma­hery no lasany, niampy fin­day iray. (Sombiny)
balan' (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
taty (nitranga in-3) : Tsy ekenay ny fampodiana
raha tsy mazava ny fandoavana io 18 volana io satria efa be loatra ny vola laninay sy ny ray amn-dreninay taty », hoy ireo mpianatra any Sina. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
tsenan' (nitranga in-1) : mpivarotra friperie sy voankazo ary legioma ny mpivarotra ao anatin'ny tsenan'ny “Bagdad”
nampivadibadika (nitranga in-1) : Niala io indrindra no nampivadibadika azy ka nifatrarany tany an-tanimbary», hoy ny fitantaran'ny olona iray izay nanatri-maso ny zava-nitranga teny an-toerana. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
which (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
fifampitsapana (nitranga in-1) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
nation' (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
hanoloran' (nitranga in-1) : Amin'ny alakamisy ho avy izao no hahafantarana izany, izay fotoana nomen' ny DNCG hanoloran'ny filohan'ny klioba io mari- bola io, raha tsy izany dia mety hidina amin'ny diviziona fahatelo na ny « National » ny klioba. (Any andafin’ny riaka)
vitsi­vitsy (nitranga in-1) : Tsiahivina fa efa ho volana vitsi­vitsy izao dia izy ihany no miandraikitra mivantana ny tarika sy ny trano mpamokatra JM Pro. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
Ahmed (nitranga in-2) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hanakarama (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory anefa no efa nanambara izy ireo fa hanakarama an'i Kombouaré, mpanazatra ny PSG fahiny, hitantana io ekipa io ao amin'ny «ligue 2». (Any andafin’ny riaka)
Fattah (nitranga in-1) : Roa andro taoriana ny mpampanoa lalàna tao afovoan-tanànan'i Kairo namoaka didy fampisamborana ny tale vaovaon'ny fantsona Abdel Fattah Fayed. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
that (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
broadcast (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
short (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
ejipsiana (nitranga in-2) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
ifotony (nitranga in-1) : ANDRANA
Nampiseho (nitranga in-1) : Nampiseho ny sarin'i Tahrir mbola mangadihady taloha ry zareo ary milaza fa vao teo no nalaina dia ataon-dry zareo eo mandritra ny ora maro izany. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
scenes (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Taxy (nitranga in-5) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
Vakinankaratra (nitranga in-1) : Na hisy aza mety tsy matetika ary any amin' ny faritra Vakinankaratra no tena mety ahitana izany”, hoy ny tombana avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro, etsy Ampandrianomby. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
Analakely (nitranga in-1) : Masaka ny nahandro ka hiaraka hiangaly ilay soradihy «Banja», etsy amin'ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) Analakely, ny harivan'ny alakamisy 11 jolay izao, i Ariry sy Sai'h. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
takosenan' (nitranga in-1) : Fifidianana madio sy mangaraharaha, hoy ianareo, saingy mbola tsy honohonon'ny hiseho masoandro akory dia efa takosenan'ny fandikan-dalàna sahady. (Fitsidiham-pahitra !)
hampahafantarina (nitranga in-1) : »Tokony hampahafantarina anay mialoha ny daty tokony hodianay raha tomombana tsara ny fandoavana ny trosa », hoy hatrany ny voarakitry ny taratasy. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
hahafantarana (nitranga in-1) : Amin'ny alakamisy ho avy izao no hahafantarana izany, izay fotoana nomen' ny DNCG hanoloran'ny filohan'ny klioba io mari- bola io, raha tsy izany dia mety hidina amin'ny diviziona fahatelo na ny « National » ny klioba. (Any andafin’ny riaka)
Mubasher (nitranga in-1) : Taorian'ny nandroahan'ny Tafika an'i Morsi tamin'ny asany, dia nitsaha-ketrika avy hatrany ny mivantan'ny Al Jazeera tao Ejipta, Al Jazeera Mubasher. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
mind (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Natsidik' (nitranga in-1) : Natsidik'ireo mpianatra ihany koa fa tokony hampitoviana avokoa ny mpianatra mandranto fianarana rehetra, toy ny any Canada, Etazonia ary Frantsa, … Mahatratra 274 ireo mpianatra malagasy any Sina ary ny 10 tamin'ireo no tonga tany alohan'ny taona 2011- 2012, raha taty aoriana avokoa ny 264. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
Zarwan (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
naiditra (nitranga in-1) : Lehilahy iray voatondro ho mpamatsy rongony saron'ny polisy tetsy Ampasika ny sabotsy 6 jolay teo no naiditra am-ponja vonjimaika rehefa avy natolotra ny Fampanoavana omaly. (Sombiny)
Napetraka (nitranga in-1) : Napetraka foana io Vaomiera sy Filankevitra na Fitsarana manokana etsy sy eroa io, fa jerem-potsiny ohatran'ny olom-pady ny fanaraha-maso sy fananarana, na izay mba tokony fampitandremana hataon'ny manampahefana amin'izany. (Fitsidiham-pahitra !)
tanjahantena (nitranga in-1) : ROA SEGAONDRA
Morsy (nitranga in-3) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
person (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
mivantan' (nitranga in-1) : Taorian'ny nandroahan'ny Tafika an'i Morsi tamin'ny asany, dia nitsaha-ketrika avy hatrany ny mivantan'ny Al Jazeera tao Ejipta, Al Jazeera Mubasher. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Albert (nitranga in-3) : tonga nanokatra ny fivorian'ny ankolafiny ny Pr Zafy Albert
An'arivony ireo mpi-zaika namaly ny antson'ny ankolafy Zafy tetsy amin' ny Mon Goûter Andrefan' Ambohijanahary, omaly. (Fampihaonan’ny FFKM – Miady ho Filohan’ny tetezamita koa Ratsiraka)
nanontany (nitranga in-1) : Raha nanontany an'i Ahmed Abu Al Mahasen ny antony hanaovana izany aho dia nolazainy fa tsy misy idirako izany (fa tokony ny asako ihany no tohizako). (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Nifantohan' (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
Andrainarivo (nitranga in-1) : nizotra moramora manaraka ny fitakian'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny fehin-kevitra nosoniavin'ireo vondrona sy antoko ary ankolafy politika nanasonia ny sori-dalana miisa sivy tetsy amin'ny «hôtel Panorama» Andrainarivo, omaly. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Hihaona (nitranga in-1) : Hihaona amin'ity lalao baolina kitra ho an'olona fito ity ny Astagra (Ambodivona) sy ny Astazon, avy ny amin'ny Fasan'ny Karàna. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
Aristide (nitranga in-2) : Araka ny fanazavan'i Velompa-nahy Aristide, filoha lefitry ny komity mpanara-maso ny fampiharana ny sori-dàlana (Csc) izay tompon' antoka tamin'ny famoriana ireto vondrona politika ireto dia «tokony ho tafatsan- gana ao anatin'ny telo na efatra herinandro eo ho eo ity fitsarana misahana ny fifidianana vaovao ity». (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Hezamy (nitranga in-1) : R A
Bolida (nitranga in-1) : bAOLINA KITRA-L2 FRANTSAY
nisioka (nitranga in-1) : Tany amin'ny fivoaran-draharaha hafa i Rawya Rageh, mpitatitr'i Al Jazeera ao Kairo, nisioka sarin-taratasy fandrahonana nalatsaka teo ivelan'ny biraon'ny Al Jazeera's Cairo tao Kairo androany:
Reports (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Mahasen (nitranga in-2) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
stormed (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hanohitra (nitranga in-1) : Tsy izahay mihitsy no hanohitra ny fitondram-panjakana satria izahay koa ao anatin'izany », hoy kosa Randriatefiarison Guillaume Venance, Lehiben' ny faritra Anosy. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
hoenty (nitranga in-1) : Ity tetikasa ity no niteraka ny tarika Androta, ka ankoatra ny dihy hoentin'i Ariry sy Sai'h dia hisy ny fitendrena mivantana ny feon-kira sy feona amponga handi­hizan'izy mirahalahy. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
Egypt (nitranga in-3) : Nanambara ny tambajotra hoe:
Londres (nitranga in-1) : “Amin' ny Can 2014 no tena hifantenana ireo ekipa roa hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao any Londres amin'ny taona 2015. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
nosoniavy (nitranga in-1) : nizotra moramora manaraka ny fitakian'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny fehin-kevitra nosoniavin'ireo vondrona sy antoko ary ankolafy politika nanasonia ny sori-dalana miisa sivy tetsy amin'ny «hôtel Panorama» Andrainarivo, omaly. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Tsiahivina (nitranga in-1) : Tsiahivina fa efa ho volana vitsi­vitsy izao dia izy ihany no miandraikitra mivantana ny tarika sy ny trano mpamokatra JM Pro. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
lying (nitranga in-2) : It's lying openly. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
saying (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
noheveriko (nitranga in-1) : Mampalahelo fa nieritreritra niasa tao amin'ny toerana noheveriko ho ananana fitokisana aho saingy [mahatsapa ankehitriny] fa ny fitokisana azy dia mifototra amin'ny fijoroana ara-politika. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hampiasa (nitranga in-1) : Miroso amin'ny fandaminana sy ny fijerena toerana ho an'ireo mpivarotra maherin' ny 300, etsy amin'ny tsena atao hoe “Bagdad”, etsy 67 Ha ny avy amin'ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua), taorian'ny fifanarahana hampiasa ny toerana vonjimaika. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
Zazavavikely (nitranga in-1) : Zazavavikely kely vao 6 taona monja no voalaza fa naolan'ny zazalahy 11 taona, ny zoma teo, tany Andovinjo Mahajanga. (Sombiny)
United (nitranga in-1) : Nitsoaka an-daharana kosa ny United FC ka nahatonga ny ligy hanafoana ireo vokatra tamin'izay lalao vitany. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
nitsoa­ka (nitranga in-1) : Nandray fepetra ny fokonolona nanenjika ireo jiolahy ireo ka lasa nitsoa­ka izy ireo sady nandoro ny trano sendra azy. (Sombiny)
hijery (nitranga in-1) : Hitady toerana
Tsy hijery fotsiny ireo mpivarotra anefa ny Cua, ary ity farany ihany no hitady toerana ho azy ireo. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
rotiky (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
line (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
staff (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
based (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
scooter (nitranga in-1) : Kamiao iray no nifaoka mpitarika sarety entin-tanana sy mpitondra »môtô scooter » teny amin'ny lalam-baovao Anosibe, omaly tolakandro. (Sombiny)
Republicans (nitranga in-1) : com/mjculx8
should (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hahemotra (nitranga in-1) : Nivory rehefa avy eo ny tompon'andraikitra ka tapaka fa hahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fametrahana ilay mpitandrina. (Disadiasam-piangonana – Tsy tafapetraka ny mpitandrina, rava ny fotoam-pivavahana)
ahafahany (nitranga in-1) : Nanamarika anefa ny Masoivoho Amerikanina fa mitombo hatrany ny fitaovana ampiasaina sy ny teknolojia vaovao azon'ny mpitsidika ampiasaina, ahafahany manitatra ny fahalalany sy traikefany. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Randriamiarinandisoa (nitranga in-1) : Telo taona ihany anefa ny fifanarahana ary efa
dila izany ka ilain'ny tompony ny tany”, hoy Randriamiarinandisoa Jean Constantin, tompon' andraikitra eo anivon'ny sampan-draharaha ara-toekarena eo anivon'ny Cua. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
adiresy (nitranga in-1) : Antso ataon'ny tompon'andraikitra ny tsy maintsy hakana izany raha tsy tonga eny anivon'ny sekoly, na amin'ny adiresin'ny mpiadina manokana. (Tapatapany)
hataon' (nitranga in-1) : Napetraka foana io Vaomiera sy Filankevitra na Fitsarana manokana etsy sy eroa io, fa jerem-potsiny ohatran'ny olom-pady ny fanaraha-maso sy fananarana, na izay mba tokony fampitandremana hataon'ny manampahefana amin'izany. (Fitsidiham-pahitra !)
nahatsikaritra (nitranga in-1) : Tsy nisy nahalala ny nanjo an'ilay zazavavikely raha tsy ny reniny efa nampandro azy ny hariva ka nahatsikaritra zavatra hafahafa. (Sombiny)
hafa' (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
during (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
years (nitranga in-1) : com/mjculx8
Rasoul (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
lies' (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
Zélande (nitranga in-1) : Hiray vondrona amin'i Nouvelle Zélande izay tompondaka eran-tany amin'ny taona 2014, raha mbola hiatrika lalao sakana amin'ny solontena Aziatika hafa ny laharana faharoa”, hoy i Marcel Rakotomalala, filohan' ny federasiona malagasin' ny baolina lavalava. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Randriamanantsoa (nitranga in-1) : Tsy vitsy ireo mpizaika avy amin'ny antoko poli-tika Kintana tarihin'i Tabera Randriamanantsoa nandray anjara tamin'ity seminera izay hifarana anio ity. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
nandroahan' (nitranga in-1) : Taorian'ny nandroahan'ny Tafika an'i Morsi tamin'ny asany, dia nitsaha-ketrika avy hatrany ny mivantan'ny Al Jazeera tao Ejipta, Al Jazeera Mubasher. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
ahafahan' (nitranga in-1) : Eo koa ny kilalao video “wii” ahafahan'ny tanora sady milalao no manitatra ny fahalalany eo amin'ny lafiny tantara sy jeografia. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Ambodiman­gavalo (nitranga in-1) : Jiolahy 20 no indray nanafika sady nandoro trano tany Manakam­bahiny Ambodiman­gavalo any amin'ny distrikan'i Vavatenina ny sabotsy 6 jolay teo. (Sombiny)
handehanan' (nitranga in-1) : « Tsy maintsy lasa izahay na inon-kidona na inon-kihatra », hoy i Saina Michel, Lehiben'ny faritra Ana-lanjirofo, omaly, nidrikina ny tsy maintsy handehanan'izy ireo any Chine, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo namany, teny amin' ny Môtel Anosy. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
nitsahatra (nitranga in-1) : «Tsy nitsahatra mihitsy izahay nanao fikarohana androany tontolo (mantsy ny omaly). (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Rajaofera (nitranga in-1) : Ankoatra ny fahasahiranan'ny olona dia eo koa ny fisian'ireo fiangonana maro miorina, izay mandrara ny fanaovana famadihana ny ankamaroany”, hoy Rajaofera Noeline, mpivarotra lambamena efa ho 30 taona mahery etsy Anosy. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
tale (nitranga in-1) : Roa andro taoriana ny mpampanoa lalàna tao afovoan-tanànan'i Kairo namoaka didy fampisamborana ny tale vaovaon'ny fantsona Abdel Fattah Fayed. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Jentilisa (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
hafampana (nitranga in-1) : Na dia efa ao anatin'ny aty ririnina aza ny vanim-potoana misy amin'izao fotoana izao, dia mbola somary hafampana kely indray ny toetr'andro. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
Twitter (nitranga in-2) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
ireto (nitranga in-12) : Samy nifanaiky ireto mpanao politika ireto fa «havaozina tanteraka ny firafitr'ilay fitsarana mano-kana misahana ny raharaham-pifidianana». (Disadiasam-piangonana – Tsy tafapetraka ny mpitandrina, rava ny fotoam-pivavahana)
fanajàna (nitranga in-1) : Mahagaga fa izay fahalalahan'ny kandidà afaka mila­tsaka na tsia no mahadodona ny eto an-toerana sy any ivelany, fa io tsy fanajàna ny làlam-pifidianana io tsy mba misy sahy manabaribary sy manameloka ren-tany aman-danitra mihitsy. (Fitsidiham-pahitra !)
hapetraka (nitranga in-1) : Voalaza fa maniry ny hapetraka eo amin'ny toeran'ny Filohan'ny fampihavanana malagasy (Ffm) ihany koa ny Filoha teo aloha Zafy Albert. (Fampihaonan’ny FFKM – Miady ho Filohan’ny tetezamita koa Ratsiraka)
nadika (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Afrika (nitranga in-4) : taorian'ny fiverenana avy tany Afrika Atsimo, dia nosoloina an'i Jôda (FTM) i Ibrahim (IRC), araka ny lisitra navoakan'ny mpanazatra nasionaly, omaly. (Anjoron- »CAN »)
recently (nitranga in-1) : com/mjculx8
John (nitranga in-1) : Antsasaka ondry iray no azon'izay ekipa mandresy eo », hoy Randrianiaina John, mpandrindra ny fifaninanana Fiteramana. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
said (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
stance (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hanaterany (nitranga in-1) : Vehivavy iray no voalaza fa saika hanaterany an'ireo rongony ireo saingy tsy hita ny misy azy io hatramin'izao. (Sombiny)
nozaray (nitranga in-2) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh tao amin'ny twitter. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Marcoss (nitranga in-3) : amin'ny alalan'ilay fandaharana “Misy raha”, ao amin'ny fahitalavitra tsy miankina iray eto an-drenivohitra sy amin'ny fahitalavitra amin'ny zana-bolana, no hitondran'i Jerry Marcoss ny fanohanany ireo mpanao hatsikana. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
reddit (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Central (nitranga in-1) : Omaly no niditra teny amin'ny hotely fandraisam-bahiny (Paon d'Or sy Central Hotel ary Plazza) handraisana azy, ireo firenena efatra mandray anjara rehetra amin'ity fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny baolina lavalava vondrona A. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
namoaka (nitranga in-2) : Roa andro taoriana ny mpampanoa lalàna tao afovoan-tanànan'i Kairo namoaka didy fampisamborana ny tale vaovaon'ny fantsona Abdel Fattah Fayed. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
offices (nitranga in-2) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
nanaovako (nitranga in-1) : “Ny fampianarana voaraiko tamin'ny fiangonana nifindrako no tsy nanaovako famadihana intsony. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
ataon' (nitranga in-2) : Antso ataon'ny tompon'andraikitra ny tsy maintsy hakana izany raha tsy tonga eny anivon'ny sekoly, na amin'ny adiresin'ny mpiadina manokana. (Fitsidiham-pahitra !)
nikotrehina (nitranga in-1) : havanana amin'ny fiangaliana soradihy i Ariry (havanana) ao amin'ny kaompania Rary
Naharitra enim-bolana no nikotrehina azy. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
Team (nitranga in-1) : Isan'ireo nandefa izany fitarainana hitadiavana porofo izany ny Vesta Team, tamin'ny lalaon' izy ireo sy ny Assm ary ny Cospn. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
karakaray (nitranga in-1) : Any Toliara indray, nanomboka ny 04 jolay teo, no nanatontosana ny foibe ara-kolotsaina mitety vohitra, karakarain'ny Masoivoho Amerikanina. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
nanizingizina (nitranga in-1) : Ny Filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina aloha dia efa nanizingizina fa « raha mbola hanitatra ny tetezamita indray no foto-dresaka amin'ity fampihaonana ity dia tsy hanaiky ny tenany ». (Fampihaonan’ny FFKM – Miady ho Filohan’ny tetezamita koa Ratsiraka)
kandidà (nitranga in-4) : Juliano Randrianja
Mbola mametraka olana hatrany ireo kandidà telo Hatramin'ny fiafaran' ny fivoriana omaly ity aloha dia mbola tsy nahitan'ireo vondrona politika marimaritra iraisana ny momba ny fitakian'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny amin'ny tokony hisintahan'ireo kandidà telo dia ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajo-elina, ny amiraly Didier Ratsiraka ary i Lalao Rava-lomanana. (Fitsidiham-pahitra !)
rugby (nitranga in-1) : ROA SEGAONDRA
fiangaliana (nitranga in-1) : havanana amin'ny fiangaliana soradihy i Ariry (havanana) ao amin'ny kaompania Rary
nahavoafaoka (nitranga in-1) : Somary teritery noho ny fisian'ny mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana ny arabe ka izay no nahavoafaoka an'ilay mpitondra sarety
hangataka (nitranga in-1) : Milaza ny hangataka « ordre de mission » ireto Lehiben'ny faritra voasakana ireto. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
asked (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Mohamed (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
nakorontan' (nitranga in-1) : Ny tatitra avy amin'ireo masoivohonay no nilaza fa nitranga izany nandritra ny fampitana ny mivantana ka nakorontan'ny mpitandro ny filaminana ny trano fanorenana ary nosamboriny ny mpanolotra, ny nasaina ary ny mpamokatra ny fandaharana. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
tiany (nitranga in-1) : Raha mifanohitra amin' izay anefa no ataontsika dia izay Filoham-pirenena lany eo izany no hanao Lalàm-panorenana mifanaraka amin'izay tiany sy mampety azy eo. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
Euros (nitranga in-1) : Mila 25 tapitrisa Euros eo ho eo ity klioba ity hahafahany mijanona ho diviziona faharoa, araka ny vokatry ny fandinihina nataon' ny sehatra fanaraha-maso ny fitantanana (DNCG) tamin'ny 26 jona lasa teo. (Any andafin’ny riaka)
hosokafan' (nitranga in-1) : Vavahady telo no hosokafan' ny federasiona hampidirana olona eny amin'ny «gradins» amin'io ka nandinika ny mety ho toerana hanaovan' izy ireo izany asa izany ilay orinasa. (Anjoron- »CAN »)
hiarahany (nitranga in-1) : Ny JM Production, noforoniny sy tantanany no mpamokatra ny fandaharana, ka hiarahany amin'ny mpanakanto samihafa. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
nataon' (nitranga in-4) : Efa nisy fidinana nataon'ny orinasa Jirama teny an-toerana, saingy andro vitsivitsy ihany dia niverina indray ny olana. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
fiantombahan' (nitranga in-1) : Noho ny fiantombahan'ny Ramadany dia nandefa taratasy ho fankaherezana ireo mpino Silamo malagasy rehetra ny Filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka. (Sombiny)
Constantin (nitranga in-1) : Telo taona ihany anefa ny fifanarahana ary efa
hifandraisan' (nitranga in-1) : “Tsy misy tokony hifandraisan'ny maty sy ny velona intsony. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
Ibrahim (nitranga in-1) : taorian'ny fiverenana avy tany Afrika Atsimo, dia nosoloina an'i Jôda (FTM) i Ibrahim (IRC), araka ny lisitra navoakan'ny mpanazatra nasionaly, omaly. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
political (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
been (nitranga in-3) : Nanambara ny tambajotra hoe:
Astagra (nitranga in-1) : Hihaona amin'ity lalao baolina kitra ho an'olona fito ity ny Astagra (Ambodivona) sy ny Astazon, avy ny amin'ny Fasan'ny Karàna. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
Adema (nitranga in-3) : Tamin'ny faran'ny herinandro teo dia mbola mitarika tamin'ny isa 34 ny Cospn, arahin'ny AS Adema (isa 30), Ajesaia (isa 29), Tana Formation (isa 26) ary IFC (isa 25). (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
soradihy (nitranga in-2) : havanana amin'ny fiangaliana soradihy i Ariry (havanana) ao amin'ny kaompania Rary
Roméo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
nahitan' (nitranga in-1) : Juliano Randrianja
fiara (nitranga in-13) : «Nandeha fiara tsy mataho-dalana ana kaompania mpanatsinjara solika lehibe iray izy sy ny lehilahy iray hafa. (Sombiny)
aorianan' (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia mety mbola hisy ny delegasiona fanindroany avy amin'ny Gic-M sy ny vaomieran'ny Rano-masimbe indianina ary ny fianakaviamben'ny frankofonia higadona eto Mada-gasikara aorianan'ny fahatongavan'izy mirahalahy ireto. (Sombiny)
fampitandremana (nitranga in-1) : Napetraka foana io Vaomiera sy Filankevitra na Fitsarana manokana etsy sy eroa io, fa jerem-potsiny ohatran'ny olom-pady ny fanaraha-maso sy fananarana, na izay mba tokony fampitandremana hataon'ny manampahefana amin'izany. (Fitsidiham-pahitra !)
frankofonia (nitranga in-1) : Araka ny fantatra dia mety mbola hisy ny delegasiona fanindroany avy amin'ny Gic-M sy ny vaomieran'ny Rano-masimbe indianina ary ny fianakaviamben'ny frankofonia higadona eto Mada-gasikara aorianan'ny fahatongavan'izy mirahalahy ireto. (Sombiny)
Michel (nitranga in-3) : « Tsy maintsy lasa izahay na inon-kidona na inon-kihatra », hoy i Saina Michel, Lehiben'ny faritra Ana-lanjirofo, omaly, nidrikina ny tsy maintsy handehanan'izy ireo any Chine, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo namany, teny amin' ny Môtel Anosy. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
Hijanona (nitranga in-1) : Hijanona vondrona A
Isan'ny tanjona ho antsika rahateo ny ho tafajanona ao amin'ny vondrona A amin'ny herintaona. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
ekipan' (nitranga in-3) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Any andafin’ny riaka)
while (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Notazonina (nitranga in-1) : ” Notazonina roa andro izy ary navotsotra rehefa handoa “onitra”. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nahitana (nitranga in-2) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
hampandeha (nitranga in-1) : Samy nilaza ireo mpivarotra fa ratsy ny tsena na dia ao anatin' ny vanim-potoana tokony hampandeha ny varotra lambamena aza ny ririnina toy izao, noho ny fisian' ny famadihana. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
2012 (nitranga in-1) : Natsidik'ireo mpianatra ihany koa fa tokony hampitoviana avokoa ny mpianatra mandranto fianarana rehetra, toy ny any Canada, Etazonia ary Frantsa, … Mahatratra 274 ireo mpianatra malagasy any Sina ary ny 10 tamin'ireo no tonga tany alohan'ny taona 2011- 2012, raha taty aoriana avokoa ny 264. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
fifampihantsiana (nitranga in-1) : « Ireo lalao fifampihantsiana ireo no antsoinay hoe miady silak'ondry. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
hisian' (nitranga in-1) : Ny tranoben'ny tanora ao Ankilifaly no mampiantrano izany mandritra ny iray volana ary hisian'izay rehetra hita ao anatin'ireny tranomboky ireny. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Qatar (nitranga in-1) : Voampanga ho nifamato-dra tamin'ny Mpirahalahy Miozolomana ka nanao ho mpitondrateniny ity fantsona miorina ao Qatar ity. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Ankatso (nitranga in-1) : Nilaza ny hisokatra hatramin'ny alahady mialoha ny fanadinana Bakalorea ny sampandraharaha misahana izany eny Ankatso, mba hanomezana taratasy fiantsoana ireo tsy nahazo. (Tapatapany)
Ajesaia (nitranga in-3) : Toy izany ihany koa ny Tana Formation nandritra ny lalaon'izy ireo sy ny Ajesaia. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
honohonon' (nitranga in-1) : Fifidianana madio sy mangaraharaha, hoy ianareo, saingy mbola tsy honohonon'ny hiseho masoandro akory dia efa takosenan'ny fandikan-dalàna sahady. (Fitsidiham-pahitra !)
Miozolomana (nitranga in-1) : Voampanga ho nifamato-dra tamin'ny Mpirahalahy Miozolomana ka nanao ho mpitondrateniny ity fantsona miorina ao Qatar ity. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Jazeera' (nitranga in-2) : Nanambara ny tambajotra hoe:
nahatonga (nitranga in-2) : Nitsoaka an-daharana kosa ny United FC ka nahatonga ny ligy hanafoana ireo vokatra tamin'izay lalao vitany. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
zazavavikely (nitranga in-1) : Tsy nisy nahalala ny nanjo an'ilay zazavavikely raha tsy ny reniny efa nampandro azy ny hariva ka nahatsikaritra zavatra hafahafa. (Sombiny)
lava (nitranga in-1) : “Samy tsara avokoa ireo mpilalao rehetra nantsoina ho an'ny ekipam-pirenena malagasy, indrindra lava ihany koa ny fanomanana, ka sarotra ny nanao ny fifantenana teo amin'ny ora farany”, hoy i Berthin Rafalimanana na i Berthin Zoto, mpanazatra ny Makis. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Ambohimanarina (nitranga in-1) : mbola mitohy hatrany isan-kariva ny fahatapahan-jiro eny Ambohimanarina sy ny manodidina. (Jiro tapaka)
nokendren' (nitranga in-1) : Raha ny voalazan'ny loharanom-baovao iray dia tsy tena ity fiara ity loatra no nokendren'ireo jiolahy fa fiara iray mitovy tanteraka aminy. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
several (nitranga in-1) : Nanambara ny tambajotra hoe:
Tournoy (nitranga in-1) : naroso ho amin'ny sabotsy 13 jolay ny lalao famaranana fifaninanana baolina kitra, “Grand Tournoi taxi foot”, hatao eny amin'ny kianjam-pasika, eny Fort Duchesne. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
used (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nampiasainay (nitranga in-1) : « Tsy nanao fangatahana »ordre de mission » izahay satria pasipaoro tsotra no nampiasainay fa tsy pasipaoro natokana ho amina asa. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
noesorina (nitranga in-1) : “Tamin'ny 2003 no nanao fifanarahana tamin'ny orinasa tompon'ny tany ny Cua mba hametrahana vonjimaika ireo mpivarotra, rehefa noesorina tetsy amin'ny kianja Rafalimanana, Ambodin'Isotry. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
Nitsahatra (nitranga in-1) : Nitsahatra niaraka tamin'ny fantso-pahitalavitra hafa maro ny Al Jazeera mivantana avy eto Ejipta. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
bala (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
hand (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
producers (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
mangaraharaha (nitranga in-1) : Fifidianana madio sy mangaraharaha, hoy ianareo, saingy mbola tsy honohonon'ny hiseho masoandro akory dia efa takosenan'ny fandikan-dalàna sahady. (Fitsidiham-pahitra !)
Abdel (nitranga in-1) : Roa andro taoriana ny mpampanoa lalàna tao afovoan-tanànan'i Kairo namoaka didy fampisamborana ny tale vaovaon'ny fantsona Abdel Fattah Fayed. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nosakanan' (nitranga in-1) : Fiara taksiborosy iray avy any Antsirabe ho any Fianarantsoa no nosakanan'ny jiolahy tao Ivato Centre ao atsimon'Ambositra, omaly vao maraim-be tokony ho tamin'ny 3 ora sy fahefany. (Sombiny)
thought (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hilamina (nitranga in-1) : Tsy mety hilamina ny firenena raha izay foana no hatao ary hiverina hatrany ny krizy », hoy ny fanazavan-dRanaivoharison Tahina, isan'ireo mpizaika amin'ity seminera ity. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
iraky (nitranga in-1) : Anio no higadona eny Ivato ny mpitarika ny fanelanela-nana iraisam-pirenena amin'ny krizy malagasy na ny Gic-M sy ny iraky ny vondrona Sadc, Dr Leonardo Simao. (Sombiny)
hôpitaly (nitranga in-1) : Efa antsasak'adiny taty aoriana vao tonga teny an-toerana ny taksibe naman' ilay namoa-doza naka ireo naratra ka nitondra azy ireo teny amin'ny hôpitaly. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
Manakam­bahiny (nitranga in-1) : Jiolahy 20 no indray nanafika sady nandoro trano tany Manakam­bahiny Ambodiman­gavalo any amin'ny distrikan'i Vavatenina ny sabotsy 6 jolay teo. (Sombiny)
hisafidianana (nitranga in-1) : Nohizingizinin'ny Filoha teo aloha Zafy Albert indray raha nanokatra an'ity fivoriana ity fa « ny fana- ovana fitsapan-kevi-bahoaka hisafidianana Lalàm-pano-renana no tokony hatao mialoha raha tena hamaha ny olana ». (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
Saripika (nitranga in-2) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh tao amin'ny twitter. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Monima (nitranga in-1) : Isan'izany ny Hpm, ny Mdm, ny Arema, ny Tgv, ny ankolafy Ravaloma-nana, ny Escopol, ny Les as, ny Monima, ny Udr-Fano-vana. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
voarakitry (nitranga in-1) : »Tokony hampahafantarina anay mialoha ny daty tokony hodianay raha tomombana tsara ny fandoavana ny trosa », hoy hatrany ny voarakitry ny taratasy. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
taxy (nitranga in-1) : naroso ho amin'ny sabotsy 13 jolay ny lalao famaranana fifaninanana baolina kitra, “Grand Tournoi taxi foot”, hatao eny amin'ny kianjam-pasika, eny Fort Duchesne. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
openly (nitranga in-1) : It's lying openly. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
kill (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Filankevitry (nitranga in-1) : Teo ihany koa ireo avy amin'ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (Ffm). (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Instapaper (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
nanenjika (nitranga in-1) : Nandray fepetra ny fokonolona nanenjika ireo jiolahy ireo ka lasa nitsoa­ka izy ireo sady nandoro ny trano sendra azy. (Sombiny)
hahafahany (nitranga in-1) : Mila 25 tapitrisa Euros eo ho eo ity klioba ity hahafahany mijanona ho diviziona faharoa, araka ny vokatry ny fandinihina nataon' ny sehatra fanaraha-maso ny fitantanana (DNCG) tamin'ny 26 jona lasa teo. (Any andafin’ny riaka)
nitafa (nitranga in-1) : « Tsy maintsy lasa izahay na inon-kidona na inon-kihatra », hoy i Saina Michel, Lehiben'ny faritra Ana-lanjirofo, omaly, nidrikina ny tsy maintsy handehanan'izy ireo any Chine, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo namany, teny amin' ny Môtel Anosy. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
Rasolofohery (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Tabera (nitranga in-1) : Tsy vitsy ireo mpizaika avy amin'ny antoko poli-tika Kintana tarihin'i Tabera Randriamanantsoa nandray anjara tamin'ity seminera izay hifarana anio ity. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
hanomezana (nitranga in-1) : Nilaza ny hisokatra hatramin'ny alahady mialoha ny fanadinana Bakalorea ny sampandraharaha misahana izany eny Ankatso, mba hanomezana taratasy fiantsoana ireo tsy nahazo. (Tapatapany)
News (nitranga in-2) : com/mjculx8
nanafika (nitranga in-1) : Jiolahy 20 no indray nanafika sady nandoro trano tany Manakam­bahiny Ambodiman­gavalo any amin'ny distrikan'i Vavatenina ny sabotsy 6 jolay teo. (Sombiny)
nandala (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny dia nandala karazan-dihy samihafa i Sai'h, niainga tany amin'ny hip-hop, nitohy tamin'ny fianarana ireo dihin-drazana afrikanina, nialoha ny nidirany tamin' ny dihy maoderina. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
nandoro (nitranga in-2) : Jiolahy 20 no indray nanafika sady nandoro trano tany Manakam­bahiny Ambodiman­gavalo any amin'ny distrikan'i Vavatenina ny sabotsy 6 jolay teo. (Sombiny)
forces (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
kills (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Threatening (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
showing (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Anosibe (nitranga in-1) : Kamiao iray no nifaoka mpitarika sarety entin-tanana sy mpitondra »môtô scooter » teny amin'ny lalam-baovao Anosibe, omaly tolakandro. (Sombiny)
Ampasampito (nitranga in-1) : Mialoha io anefa dia hisy ny lalao fifampitsapana roa hihaonan' ny ekipan'i Taxi Tsimbazaza sy Taxi Ambohitsoa, ho dimbiasan'ny ekipan'ny Taxi Gara Ampasampito sy ny Taxi Pochard. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
idirako (nitranga in-1) : Raha nanontany an'i Ahmed Abu Al Mahasen ny antony hanaovana izany aho dia nolazainy fa tsy misy idirako izany (fa tokony ny asako ihany no tohizako). (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Rageh (nitranga in-1) : Tany amin'ny fivoaran-draharaha hafa i Rawya Rageh, mpitatitr'i Al Jazeera ao Kairo, nisioka sarin-taratasy fandrahonana nalatsaka teo ivelan'ny biraon'ny Al Jazeera's Cairo tao Kairo androany:
67ha (nitranga in-1) : «Mampitohy ny 67ha amin'Ankatso ary marika »Mercedes Sprinter » io fiara tra-doza io. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
coverage' (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
Nanambara (nitranga in-1) : Nanambara ny tambajotra hoe:
nanakaiky (nitranga in-1) : «Bala telo no nahavoa an' ilay mpamily namoy ny ainy: ny iray nanakaiky ny fony, ny iray teo amin'ny kibony ary ny iray niantefa tamin'ny foto-peny. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
soaradihy (nitranga in-1) : Raha mahazatra hatramin'izay ny fahitana fampisehoana amin'ny sehatra marindrano, dia hampiavaka ity soaradihy ity ny fitondrana ny seho amin'ny sehatra manao ambaratonga. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
tanjaky (nitranga in-1) : Nambaran'ireo mponina fa na tapaka na midina ambany dia ambany ny tanjaky ny herinaratra ka ahiana hanimba entana. (Jiro tapaka)
security (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
guests (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hahatongavan' (nitranga in-1) : Nampahatsiahy ihany koa ny Ofisin'ny Bakalorea Antananarivo ny amin'ny tokony hahatongavan'ny mpiadina 30 minitra mialoha ny hanombohan' ny fanadinana. (Tapatapany)
Marc (nitranga in-1) : Araka ny voalazan'ny loharanom-baovao iray dia mikendry ny ho Filohan'ny tetezamita miaraka amin'i Andry Rajoelina ny Filoha teo aloha, Didier Ratsiraka, raha ny fikatsahana ny fiverenany malalaka eto an-tanindrazana no mahamaika an'i Marc Ravalomanana. (Fampihaonan’ny FFKM – Miady ho Filohan’ny tetezamita koa Ratsiraka)
fampisamborana (nitranga in-1) : Roa andro taoriana ny mpampanoa lalàna tao afovoan-tanànan'i Kairo namoaka didy fampisamborana ny tale vaovaon'ny fantsona Abdel Fattah Fayed. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Cosfa (nitranga in-3) : R A
Ireo lalao mbola tsy vita Tana Formation # IFC Tana Formation # Adema Adema # ASSM Cospn # Hezami Ajesaia # Cosfa Cosfa # Vesta. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
noresahina (nitranga in-1) : « Efa noresahina kely ny mikasika ireo rehetra ireo nandritra ilay fihaonana farany teo, saingy tsy mbola nisy zavatra raikitra aloha », hoy ihany ilay loharanom-baovao. (Fampihaonan’ny FFKM – Miady ho Filohan’ny tetezamita koa Ratsiraka)
tsaroanay (nitranga in-1) : “Efa ela izahay no nivarotra ary tsaroanay tsara ny fifanarahana tamin'izany. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
lalàna (nitranga in-2) : Efa nametraka fitoriana any amin'ny Fitsarana ny federasiona, ka tsy handefitra amin'izay mandika lalàna izy ireo. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Berthin (nitranga in-2) : “Samy tsara avokoa ireo mpilalao rehetra nantsoina ho an'ny ekipam-pirenena malagasy, indrindra lava ihany koa ny fanomanana, ka sarotra ny nanao ny fifantenana teo amin'ny ora farany”, hoy i Berthin Rafalimanana na i Berthin Zoto, mpanazatra ny Makis. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
hanaovany (nitranga in-1) : Any Chine no halehanay ka hanao sonia fifanarahana miaraka amin'ny orinasa Mailand mahakasika ny asa sosialy izay ataony any amin'ireo toerana hanaovany fitrandrahana no anton-dianay any. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
baravy (nitranga in-1) : Voafaokan'ny kodiarana aorian'ilay kamiao ilay sarety ka nihantona niaraka tamin' ny baravy entin-tanana mihitsy ilay lehilahy mpitondra azy. (Sombiny)
Augustin (nitranga in-1) : Maty rotiky ny balan'ny jiolahy tany Ankejabe, 7 km miala ny tanànan'Ilakaka Rasolofohery Augustin fantatra amin'ny anarana hoe Rasoul, filohan'ny klioban'ny US Ikopa, omaly maraina tokony ho tamin'ny 8 ora latsaka fahefany. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Jôda (nitranga in-1) : taorian'ny fiverenana avy tany Afrika Atsimo, dia nosoloina an'i Jôda (FTM) i Ibrahim (IRC), araka ny lisitra navoakan'ny mpanazatra nasionaly, omaly. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Môtel (nitranga in-1) : « Tsy maintsy lasa izahay na inon-kidona na inon-kihatra », hoy i Saina Michel, Lehiben'ny faritra Ana-lanjirofo, omaly, nidrikina ny tsy maintsy handehanan'izy ireo any Chine, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo namany, teny amin' ny Môtel Anosy. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
nametrahana (nitranga in-1) : Ny alahady teo indray no fotoana natokana nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny mpitan­drina vaovao, saingy tsy tontosa koa izany. (Disadiasam-piangonana – Tsy tafapetraka ny mpitandrina, rava ny fotoam-pivavahana)
natokana (nitranga in-2) : « Tsy nanao fangatahana »ordre de mission » izahay satria pasipaoro tsotra no nampiasainay fa tsy pasipaoro natokana ho amina asa. (Disadiasam-piangonana – Tsy tafapetraka ny mpitandrina, rava ny fotoam-pivavahana)
nanontaniana (nitranga in-1) : Rehefa omen'ny kaominina toerana hivarotana izahay dia mety aminay”, hoy ireo mpivarotra sasany nanontaniana omaly. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
naheno (nitranga in-1) : “Hatramin'izao aloha dia mbola tsy naheno izany vaovao izany aho. (Any andafin’ny riaka)
distrikan' (nitranga in-1) : Jiolahy 20 no indray nanafika sady nandoro trano tany Manakam­bahiny Ambodiman­gavalo any amin'ny distrikan'i Vavatenina ny sabotsy 6 jolay teo. (Sombiny)
happened (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
mpilalao (nitranga in-4) : isan'ireo ekipa nandefa fitarainana ny Tana Formation
nidirany (nitranga in-1) : Amin'ny ankapobeny dia nandala karazan-dihy samihafa i Sai'h, niainga tany amin'ny hip-hop, nitohy tamin'ny fianarana ireo dihin-drazana afrikanina, nialoha ny nidirany tamin' ny dihy maoderina. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
minisiteran' (nitranga in-2) : nandefa taratasy ho an'ny minisiteran'ny Fampianarana ambony, omaly, ireo mpianatra malagasy any Sina. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
business (nitranga in-1) : When I asked Ahmed Abu Al Mahasen for the reason he said that I should mind my own business. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Mailand (nitranga in-1) : Any Chine no halehanay ka hanao sonia fifanarahana miaraka amin'ny orinasa Mailand mahakasika ny asa sosialy izay ataony any amin'ireo toerana hanaovany fitrandrahana no anton-dianay any. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
hiangaly (nitranga in-1) : Masaka ny nahandro ka hiaraka hiangaly ilay soradihy «Banja», etsy amin'ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) Analakely, ny harivan'ny alakamisy 11 jolay izao, i Ariry sy Sai'h. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
hanipazany (nitranga in-1) : Fitsidiham-pahitra, ka hanipazany vilona ihany ianao anio, fa rahampitso dia hakany ny ronono matavy fotsiny…
Arira. (Fitsidiham-pahitra !)
despicable (nitranga in-1) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
atahoran' (nitranga in-1) : Eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana, izay atahoran'ny mponina mafy mihitsy ao anatin' izany haizina izany. (Jiro tapaka)
Aziatika (nitranga in-1) : Hiray vondrona amin'i Nouvelle Zélande izay tompondaka eran-tany amin'ny taona 2014, raha mbola hiatrika lalao sakana amin'ny solontena Aziatika hafa ny laharana faharoa”, hoy i Marcel Rakotomalala, filohan' ny federasiona malagasin' ny baolina lavalava. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
become (nitranga in-1) : com/mjculx8
Fiteramana (nitranga in-1) : Antsasaka ondry iray no azon'izay ekipa mandresy eo », hoy Randrianiaina John, mpandrindra ny fifaninanana Fiteramana. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
Leonardo (nitranga in-2) : Anio no hanolotra ity fehin-kevitra voasonia teny amin'ny «hôtel Panorama» ity amin'ireo delegasiona tarihin'ny mpitarika ny fanelanelanana iraisam-pirenena misahana ny krizy malagasy, Joaquim Chissano sy ny Dr Leonardo Simao ny Csc sy ireto vondrona politika miisa sivy ireto. (Sombiny)
Serge (nitranga in-1) : Isan'ireo najanona i Chabal (US Ikopa), Haja (3FB), Dera (Savonnerie) ary Serge (FTM). (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Nampahatsiahy (nitranga in-2) : Nampahatsiahy ihany koa ny Ofisin'ny Bakalorea Antananarivo ny amin'ny tokony hahatongavan'ny mpiadina 30 minitra mialoha ny hanombohan' ny fanadinana. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
arahy (nitranga in-1) : Tamin'ny faran'ny herinandro teo dia mbola mitarika tamin'ny isa 34 ny Cospn, arahin'ny AS Adema (isa 30), Ajesaia (isa 29), Tana Formation (isa 26) ary IFC (isa 25). (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
Cospn (nitranga in-3) : Isan'ireo nandefa izany fitarainana hitadiavana porofo izany ny Vesta Team, tamin'ny lalaon' izy ireo sy ny Assm ary ny Cospn. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
nilaza (nitranga in-2) : Samy nilaza ireo mpivarotra fa ratsy ny tsena na dia ao anatin' ny vanim-potoana tokony hampandeha ny varotra lambamena aza ny ririnina toy izao, noho ny fisian' ny famadihana. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
ekipa (nitranga in-8) : isan'ireo ekipa nandefa fitarainana ny Tana Formation
Aorian'ny valin'ny fitarainana nataon'ireo klioba, momba ny taonan'ireo mpilalao sy ny andro farany amin'ny sabotsy izao, no hamantarana ireo ekipa efatra hiatrika ny «Poule des AS», eo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'Analamanga ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hitadiavana (nitranga in-2) : “Asa fiveloman'ny mpivarotra io ka tsy maintsy hitadiavana vahaolana. (Kitra U13 Analamanga – Ho fantatra amin’ny sabotsy ireo hiatrika «Poule des AS»)
hanaovan' (nitranga in-1) : Vavahady telo no hosokafan' ny federasiona hampidirana olona eny amin'ny «gradins» amin'io ka nandinika ny mety ho toerana hanaovan' izy ireo izany asa izany ilay orinasa. (Anjoron- »CAN »)
Astazon (nitranga in-1) : Hihaona amin'ity lalao baolina kitra ho an'olona fito ity ny Astagra (Ambodivona) sy ny Astazon, avy ny amin'ny Fasan'ny Karàna. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
hampandrosoana (nitranga in-1) : « Ataonay izany raha izay no hamahana ny olana ka hampandrosoana ny faritra misy anay. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
mpiadina (nitranga in-3) : mIVOHA ALAHADY
Arema (nitranga in-1) : Isan'izany ny Hpm, ny Mdm, ny Arema, ny Tgv, ny ankolafy Ravaloma-nana, ny Escopol, ny Les as, ny Monima, ny Udr-Fano-vana. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Joaquim (nitranga in-1) : Anio no hanolotra ity fehin-kevitra voasonia teny amin'ny «hôtel Panorama» ity amin'ireo delegasiona tarihin'ny mpitarika ny fanelanelanana iraisam-pirenena misahana ny krizy malagasy, Joaquim Chissano sy ny Dr Leonardo Simao ny Csc sy ireto vondrona politika miisa sivy ireto. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Fayed (nitranga in-2) : Roa andro taoriana ny mpampanoa lalàna tao afovoan-tanànan'i Kairo namoaka didy fampisamborana ny tale vaovaon'ny fantsona Abdel Fattah Fayed. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nanazava (nitranga in-1) : Niezaka nanazava ny zava-nitranga teny Ivato ny zoma hariva teo, ka nisian'ny fanakanana azy ireo tsy hahazo miala eto Madagasikara ireo Lehiben'ny faritra nahitana an'i Namany Belone, Randriantefiarison Guillaume Venance ary Saina Michel. (Tsy fahazoan-dalana mivoaka – Mitady ny fomba rehetra handehanana ireo Lehiben’ ny faritra voasakana)
andriantsiferanarivo (nitranga in-1) : andriantsiferanarivo. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
Andriamoratsiresy (nitranga in-1) : «Io antony io no nahatonga ny safidy tany amin'ny Sai'h, izay manana ny mampiavaka azy amin'ny tontolon'ny dihy», araka ny fanazavan'i Ariry Andriamoratsiresy, sady mpandihy no mpitarika ihany koa ny kaompania sy toerana fampiaranarana dihy Rary. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
ankitsirano (nitranga in-1) : Mandainga ankitsirano mihitsy io. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Hotel (nitranga in-1) : Omaly no niditra teny amin'ny hotely fandraisam-bahiny (Paon d'Or sy Central Hotel ary Plazza) handraisana azy, ireo firenena efatra mandray anjara rehetra amin'ity fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny baolina lavalava vondrona A. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
nampiasan' (nitranga in-1) : Raha ny fahitana azy dia basim-borona no nampiasan'ireo jiolahy satria mbola nisy taim-bala hita teo amin'ny manodidina. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
biraon' (nitranga in-6) : Olona roa mampiahiahy no efa tanana ao amin'ny biraon'ny zandary any an-toerana amin'izao fotoana izao. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
nifindrako (nitranga in-1) : “Ny fampianarana voaraiko tamin'ny fiangonana nifindrako no tsy nanaovako famadihana intsony. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
nahavoa (nitranga in-2) : Nitifitra ireo mpanakan-dalana ka tamin' izay no nahavoa ilay mpamily. (Maty rotiky ny balan’ny jiolahy ny filohan’ny Us Ikopa)
Farafangana (nitranga in-1) : mbola niverina indray ny alahady teo ny savorovoro eo anivon'ny fiangonana lehibe iray any Farafangana. (Disadiasam-piangonana – Tsy tafapetraka ny mpitandrina, rava ny fotoam-pivavahana)
nikasoka (nitranga in-1) : Rehefa avy nisongona fiara iray teo alohany izy dia nikasoka tamin' ny fiara »Mazda » iray izay nifanena taminy. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
nasesy (nitranga in-1) : Trano fito no nasesin'ny jiolahy notafihina tany Tsaravavaka Vinany Mandoto, ny sabotsy 6 jolay teo tokony ho tamin' ny 9 ora sy sasany alina. (Sombiny)
hifarana (nitranga in-1) : Tsy vitsy ireo mpizaika avy amin'ny antoko poli-tika Kintana tarihin'i Tabera Randriamanantsoa nandray anjara tamin'ity seminera izay hifarana anio ity. (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
Velompanahy (nitranga in-1) : «Azo vinavinaina ho any amin'ny faramparan' ny volana novambra na fara fahatarany amin'ny fiandohan'ny volana desambra any ho any ny fifidianana Filoham-pire-nena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka», hoy ihany i Velompanahy Aristide. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
taken (nitranga in-2) : Nanambara ny tambajotra hoe:
Namibia (nitranga in-1) : I Namibia, izay tompondakan'i Afrika teo amin'ny vondrona B no hiakatra hiady toerana amin'ny herintaona. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
mampiahiahy (nitranga in-1) : Olona roa mampiahiahy no efa tanana ao amin'ny biraon'ny zandary any an-toerana amin'izao fotoana izao. (Sombiny)
mpitan­drina (nitranga in-1) : Ny alahady teo indray no fotoana natokana nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny mpitan­drina vaovao, saingy tsy tontosa koa izany. (Disadiasam-piangonana – Tsy tafapetraka ny mpitandrina, rava ny fotoam-pivavahana)
Jean (nitranga in-1) : Telo taona ihany anefa ny fifanarahana ary efa
with (nitranga in-1) : Nanambara ny tambajotra hoe:
hody (nitranga in-1) : Nanaiky hody sady nametraka fepetra ireo mpianatra ireo raha voaloa tokoa ireo trosa ireo. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
bullet (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Nouvelle (nitranga in-1) : Hiray vondrona amin'i Nouvelle Zélande izay tompondaka eran-tany amin'ny taona 2014, raha mbola hiatrika lalao sakana amin'ny solontena Aziatika hafa ny laharana faharoa”, hoy i Marcel Rakotomalala, filohan' ny federasiona malagasin' ny baolina lavalava. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Chissano (nitranga in-1) : Anio no hanolotra ity fehin-kevitra voasonia teny amin'ny «hôtel Panorama» ity amin'ireo delegasiona tarihin'ny mpitarika ny fanelanelanana iraisam-pirenena misahana ny krizy malagasy, Joaquim Chissano sy ny Dr Leonardo Simao ny Csc sy ireto vondrona politika miisa sivy ireto. (Fifanarahana teny amin’ny Panorama – Ravaina ny Ces ary hovitaina amin’ ny desambra ny fifidianana)
Cercle (nitranga in-1) : Masaka ny nahandro ka hiaraka hiangaly ilay soradihy «Banja», etsy amin'ny Cercle Germano-Malagasy (CGM) Analakely, ny harivan'ny alakamisy 11 jolay izao, i Ariry sy Sai'h. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
maso (nitranga in-1) : ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny pejy manokana Ejipsiana Nanongana an'i Morsi
empty (nitranga in-1) : They are showing old footage from an empty Tahrir and saying it was taken a short while ago and they are airing the scenes for hours. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Nohizingiziny (nitranga in-1) : Nohizingizinin'ny Filoha teo aloha Zafy Albert indray raha nanokatra an'ity fivoriana ity fa « ny fana- ovana fitsapan-kevi-bahoaka hisafidianana Lalàm-pano-renana no tokony hatao mialoha raha tena hamaha ny olana ». (Semineran’ny ankolafy Zafy – Manizingizina ny tokony hifidianana Lalàm-panorenana mialoha)
naharay (nitranga in-2) : Nilaza ho efa naharay izany taratasy nalefan'ireo mpianatra any Sina izany ny eo anivon'ny minisiteran' ny Fampianarana ambony. (Any andafin’ny riaka)
nantsoina (nitranga in-1) : “Samy tsara avokoa ireo mpilalao rehetra nantsoina ho an'ny ekipam-pirenena malagasy, indrindra lava ihany koa ny fanomanana, ka sarotra ny nanao ny fifantenana teo amin'ny ora farany”, hoy i Berthin Rafalimanana na i Berthin Zoto, mpanazatra ny Makis. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
teknolojia (nitranga in-2) : Nanamarika anefa ny Masoivoho Amerikanina fa mitombo hatrany ny fitaovana ampiasaina sy ny teknolojia vaovao azon'ny mpitsidika ampiasaina, ahafahany manitatra ny fahalalany sy traikefany. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
Sprinter (nitranga in-1) : «Mampitohy ny 67ha amin'Ankatso ary marika »Mercedes Sprinter » io fiara tra-doza io. (Tsy fitandremana – Taksibe 187 nirimorimo nivarina tany an-tanimbary)
horonantsary (nitranga in-1) : Ankoatra ny boky miresaka ny tontolo iainana, ny tanora sy ny fandraharahana, ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary fitaovana fianarana teny anglisy…, dia mampiavaka ity foibe ara-kolotsaina ity ihany koa reo fitaovana mampiasa ny teknolojia vaovao, toy ny boky elektronika “kindle” azo amakiana karazam-boky aman-jatony maro; ny I-pad sy solosaina ary horonantsary isan-karazany mampiseho ny maha zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
teritery (nitranga in-1) : Somary teritery noho ny fisian'ny mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana ny arabe ka izay no nahavoafaoka an'ilay mpitondra sarety
Production (nitranga in-1) : Ny JM Production, noforoniny sy tantanany no mpamokatra ny fandaharana, ka hiarahany amin'ny mpanakanto samihafa. (Fandaharana fahitalavitra – Manosika ireo mpanao hatsikana ihany koa i Jerry Marcoss)
Ampandrianomby (nitranga in-1) : Na hisy aza mety tsy matetika ary any amin' ny faritra Vakinankaratra no tena mety ahitana izany”, hoy ny tombana avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro, etsy Ampandrianomby. (Toetr’andro – Tsy hisy intsony ny hatsiaka mamirifiry)
fifangaroana (nitranga in-1) : Ampolony ireo tanora, 20 ka hatramin' ny 28 taona mandrafitra ny tarika Androta, izay ahitana fifangaroana kanto samihafa toy ny hira, mozika, tsianjery, jijy, kabary, sôva…
FR. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
legioma (nitranga in-1) : mpivarotra friperie sy voankazo ary legioma ny mpivarotra ao anatin'ny tsenan'ny “Bagdad”
credibility (nitranga in-2) : Sadly I used to work in a place which I thought had credibility but [I now realise] its credibility is based on a despicable political stance. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
when (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
other (nitranga in-2) : Nanambara ny tambajotra hoe:
hodianay (nitranga in-1) : »Tokony hampahafantarina anay mialoha ny daty tokony hodianay raha tomombana tsara ny fandoavana ny trosa », hoy hatrany ny voarakitry ny taratasy. (Malagasy any Sina – Tsy manaiky fampodiana ireo mpianatra raha tsy voaloa ny trosa)
diviziona (nitranga in-2) : Mila 25 tapitrisa Euros eo ho eo ity klioba ity hahafahany mijanona ho diviziona faharoa, araka ny vokatry ny fandinihina nataon' ny sehatra fanaraha-maso ny fitantanana (DNCG) tamin'ny 26 jona lasa teo. (Any andafin’ny riaka)
handraisana (nitranga in-1) : Omaly no niditra teny amin'ny hotely fandraisam-bahiny (Paon d'Or sy Central Hotel ary Plazza) handraisana azy, ireo firenena efatra mandray anjara rehetra amin'ity fiadiana ny ho tompondakan'i Afrika ho an'ny baolina lavalava vondrona A. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Karàna (nitranga in-1) : Hihaona amin'ity lalao baolina kitra ho an'olona fito ity ny Astagra (Ambodivona) sy ny Astazon, avy ny amin'ny Fasan'ny Karàna. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
marindrano (nitranga in-1) : Raha mahazatra hatramin'izay ny fahitana fampisehoana amin'ny sehatra marindrano, dia hampiavaka ity soaradihy ity ny fitondrana ny seho amin'ny sehatra manao ambaratonga. (Soradihy – Hiangaly ny «Banja» amin’ny sehatra manao ambaratonga i Ariry sy Sai’h)
mpilalaon' (nitranga in-1) : bAOLINA KITRA-L2 FRANTSAY
resign (nitranga in-1) : Ao amin'ny Twitter i Elijah Zarwan no namoaka hevitra:
Randrianiaina (nitranga in-1) : Antsasaka ondry iray no azon'izay ekipa mandresy eo », hoy Randrianiaina John, mpandrindra ny fifaninanana Fiteramana. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
Nandika (nitranga in-1) : Saripika nozarain'i @RawyaRageh ao amin'ny Twitter
Duchesne (nitranga in-1) : naroso ho amin'ny sabotsy 13 jolay ny lalao famaranana fifaninanana baolina kitra, “Grand Tournoi taxi foot”, hatao eny amin'ny kianjam-pasika, eny Fort Duchesne. (Famaranana kitra « Taxi foot » – Hisy fiadiana silak’ondry eny Fort Duchesne)
hitantana (nitranga in-1) : Vao tsy ela akory anefa no efa nanambara izy ireo fa hanakarama an'i Kombouaré, mpanazatra ny PSG fahiny, hitantana io ekipa io ao amin'ny «ligue 2». (Any andafin’ny riaka)
Anosy (nitranga in-3) : « Tsy maintsy lasa izahay na inon-kidona na inon-kihatra », hoy i Saina Michel, Lehiben'ny faritra Ana-lanjirofo, omaly, nidrikina ny tsy maintsy handehanan'izy ireo any Chine, raha nitafa tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ireo namany, teny amin' ny Môtel Anosy. (Fombafomba – Tsy mandeha ny varotra lambamena)
leaflets (nitranga in-1) : @RawyaRageh: Threatening leaflets dropped near AlJazeera's offices in Cairo – bloodied hand & line ‘lies & other lies' #Egypt
building (nitranga in-1) : Reports from our correspondents say this happened during a live broadcast when security forces stormed the building and arrested the presenter, guests and producers. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
manabaribary (nitranga in-1) : Mahagaga fa izay fahalalahan'ny kandidà afaka mila­tsaka na tsia no mahadodona ny eto an-toerana sy any ivelany, fa io tsy fanajàna ny làlam-pifidianana io tsy mba misy sahy manabaribary sy manameloka ren-tany aman-danitra mihitsy. (Fitsidiham-pahitra !)
Doha (nitranga in-1) : ” Ny tatitra hafa [ar] no milaza fa 26 ny mpiasa ejipsiana niala, ka ao anatin'izany ny mpiasa efatra miasa any amin'ny foibe ao Doha. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
hampidirana (nitranga in-1) : Vavahady telo no hosokafan' ny federasiona hampidirana olona eny amin'ny «gradins» amin'io ka nandinika ny mety ho toerana hanaovan' izy ireo izany asa izany ilay orinasa. (Anjoron- »CAN »)
ahiana (nitranga in-1) : Nambaran'ireo mponina fa na tapaka na midina ambany dia ambany ny tanjaky ny herinaratra ka ahiana hanimba entana. (Jiro tapaka)
handehanako (nitranga in-1) : Ny fanaovan-tsonia rahateo efa vita teo amin'ny Tana Formation sy ny RC Lens amin'ny handehanako any”, hoy i Dafe, izay nanao fifanarahana hilalao roa taona any Lens. (Any andafin’ny riaka)
Facebook (nitranga in-1) : Mpanao gazety iray, Wesam Fadhel nitatitra ny fialany ao amin'ny sata Facebook [ar]. (Al Jazeera Voampanga Ho Mitati-Baovao “Mitongilana” Ao Ejipta)
Anisan' (nitranga in-1) : Anisan'ny zava-baovao ka nosantarina tao Toliara kosa ny solosaina manokana ho an'ny ankizy. (Masoivoho Amerikanina – Any Toliara indray ny foiben-kolontsaina mitety vohitra)
2003 (nitranga in-1) : “Tamin'ny 2003 no nanao fifanarahana tamin'ny orinasa tompon'ny tany ny Cua mba hametrahana vonjimaika ireo mpivarotra, rehefa noesorina tetsy amin'ny kianja Rafalimanana, Ambodin'Isotry. (Tsena Bagdad 67 ha – Afindra toerana ireo mpivarotra 300 mahery)
navoakan' (nitranga in-1) : taorian'ny fiverenana avy tany Afrika Atsimo, dia nosoloina an'i Jôda (FTM) i Ibrahim (IRC), araka ny lisitra navoakan'ny mpanazatra nasionaly, omaly. (Rugby « CAN 2013″ – Mpilalao roa nankany Afrika Atsimo no nosoloina tao amin’ny Makis)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/9_Jolay_2013&oldid=11855252"
Voaova farany tamin'ny 9 Jolay 2013 amin'ny 21:01 ity pejy ity.